आवश्यक एक व्यावसायिक दायित्व वकील मा संघाई, चीन । वेबसाइट
संघाई चीन सबैभन्दा ठूलो शहर र केन्द्र वाणिज्य र वित्त । आर्मस्ट्रांग मा भएको छ देखि चीन हाम्रो काम मा पुरस्कार विजेता लेनदेन मा चीन छ । सबैभन्दा रह, हामी सल्लाह ग्राहकहरु मा विषयहरूमा सम्बन्धित निर्माण र पूर्वाधार परियोजनाहरू, जमानत, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विलय, अधिग्रहण व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन मा स्थापित, छ अहिले भन्दा बढी वकिल संग दुई कार्यालय पेरिस र हङकङ । वकिल' विशेषज्ञ ज्ञान को एक नम्बर को विशेषज्ञ क्षेत्रमा गर्न तिनीहरूलाई सक्षम ठेगाना को पूर्ण सीमा को आफ्नो ग्राहकहरु' आवश्यकताहरु. गरेको मुख्य क्षेत्रहरु गतिविधिहरु को छन् सम्पत्ति व्यवस्था छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन सैंडर्स छ अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था दृढ संग अधिक वकिल र सोह्र कार्यालय मा उत्तर अमेरिका, युरोप र एशिया स्थापित मा, दृढ सम्पदाको को व्यापक अनुभव छ, असाधारण प्रतिक्रिया र एक अटूट प्रतिबद्धता सेवा, लामो-खडा छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन क्लाइड कं, छ एक गतिशील, तेजी विस्तार वैश्विक व्यवस्था दृढ मा केन्द्रित प्रदान एक पूर्ण कानूनी सेवा गर्न ग्राहकहरु हाम्रो कोर क्षेत्र । हामी सल्लाह कारोबार छन् कि को दिल मा विश्वव्यापी वाणिज्य र व्यापार । हाम्रो संयोजन को क्षेत्र मा विशेषज्ञता, व्यावसायिक मनोवृत्ति र मा-गहिराई । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन ब्रायन गुफा केंद्रित सबै आफ्नो ऊर्जा र प्रयास मा प्रदान सबै भन्दा राम्रो सम्भव कानूनी प्रतिनिधित्व गर्न थप हाम्रो ग्राहकहरु' चासो छ । को संघाई कार्यालय मा आफ्नो ढोका खोलिदिएसंग राम्ररी काम एशियाली कार्यालय मा स्थित हङकङ, बेइजिङ, सिंगापुर र टोकियो, संघाई कार्यालय प्रतिनिधित्व अमेरिकी, युरोपेली र एसियाली कम्पनीहरु सञ्चालन व्यापार मा चीन र भर को एशिया प्रशान्त क्षेत्र मा, र चिनियाँ कम्पनीहरु मा त्यहाँ. गेट्स प्रतिनिधित्व अग्रणी वैश्विक निगम, वृद्धि र मध्य-बजार कम्पनीहरु, राजधानी बजार सहभागीहरू र उद्यमिहरु मा हरेक प्रमुख उद्योग समूह साथै सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, संगठन र व्यक्तिहरूलाई । हाम्रो अभ्यास छ एक छ । हामी एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक व्यवस्था दृढ मा कार्यालय संग बेइजिङ, दुबई, हैम्बर्ग, हङकङ, लन्डन, मोनाको, पेरिस, प्योइ, संघाई र सिंगापुर । हाम्रो ग्राहकहरु देखि लिएर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निगम गर्न साना कम्पनीहरु, एकमात्र व्यापारीहरु र निजी व्यक्तिहरूलाई. हामी अभ्यास अंग्रेजी । मेयर खैरो जेएम गरेको हङकङ कार्यालय, घर छ सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा लामो-स्थापित व्यवस्था कम्पनीहरु मा हङकङ । सजिलै केन्द्रीय मा स्थित, हामी अधिक वकिल आधारित हङकङ मा विशेषज्ञता, विभिन्न उद्योग । हामी सक्षम छन् संग ग्राहकहरु प्रदान गर्न, पूर्ण र एकीकृत सीमा छ । सिमोन साझेदार एक पूर्ण-सेवा व्यवस्था दृढ मा आधारित संघाई, चीन । सबै वकिल फर्म मा शेयर एक दृष्टि: प्रतिबद्धता व्यावसायिकता र उत्कृष्टता मा एक वातावरण आपसी सहयोग । सिमोन साझेदार सधैं लक्ष्य प्रदान गर्न उच्च-गुणवत्ता र लागत-प्रभावकारी कानूनी. भए को एक ठूलो कानूनी सेवा प्रदायकको संसारमा माध्यम मा एक विलय को अभूतपूर्व क्षेत्र मा कानूनी क्षेत्र छ । जबकि ठूलो मात्रा मा, विलय रणनीति सरल थियो - सिर्जना गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अभ्यास सक्षम हेरविचार लिएर को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता छ । अस्टिन एक वैश्विक व्यवस्था दृढ संग, लगभग मा वकिल सत्र कार्यालय छ । हामी प्रदान को एक व्यापक सीमा कानूनी सेवा को आवश्यकता पूरा गर्न हाम्रो विविध ग्राहक आधार छ । रणनीतिक को स्थापना हाम्रो कार्यालय मा प्रमुख कर्पोरेट र वित्तीय केन्द्र को विश्व सक्षम छ हामीलाई । यो कार्य समझ द्वारा यसको ग्राहकहरु' मान र माग र कार्यान्वयन रणनीति अनुकूल लक्ष्य हासिल गर्न छ । यो बाटो मा, संतुष्ट आवश्यक हाम्रो ग्राहकहरु पाउन र आफ्नो भरोसा. हाम्रो ग्राहकहरु मूल्य हाम्रो सेवा र अमेरिकी सम्बन्ध किनभने हामी लिन एक अद्वितीय छ ।.
र वकील को शक्ति लागि चीन - चीन प्रमाणीकरण
चीन को सदस्य छैन त्यसैले, यो छ छैन एक देश । संसाधन कागजातहरू जस्तै जन्म प्रमाणपत्र, शक्ति को वकील, कर्पोरेट कागजातहरू, संस्थापन को लेख, व्यक्तिगत कागजात, विवाहको प्रमाणपत्र आदिएक माध्यम पर्छ, एक लामो प्रक्रिया को श्रृंखला को प्रमाणीकरण छ । जब कागजात पूर्णतया कानुनी हुन सक्छ चिन्न मा चीन छ । के छ एक. मा उपलब्ध छन् जो देशहरू, हस्ताक्षर आवश्यकता को को विदेशी सार्वजनिक कागजातहरू. यो महासन्धि, सिर्जना मा, प्रतिस्थापन समय श्रृंखला प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रयोग यति सम्म, जहाँ तपाईं जान थियो, चार विभिन्न अधिकारीहरूले प्राप्त गर्न एक कागजात प्रमाणित. वकील को शक्ति, सम्बन्धविच्छेद उर्दी, कागजातहरू, जन्म प्रमाणपत्र, कर्पोरेट कागजातहरू, एफडीए कागजातहरू आदि. चीन एक पार्टी कुनै चीन गर्न पार्टी छैन, यो, मकाउ र हङकङ गर्न दलहरू छन्. वकील को एक शक्ति वा पत्र वकील को साधारण मा व्यवस्था प्रणाली वा जनादेश मा नागरिक कानून प्रणाली छ एक प्राधिकरण मा काम गर्न कसैले अरू कसैको तर्फबाट एक कानूनी वा व्यवसाय कुरा. व्यक्ति नाउँ मा वकील को एक शक्ति गर्न आफ्नो तर्फबाट काम सामान्यतः रूपमा उल्लेख आफ्नो"एजेन्ट"वा"वकील-मा-वास्तवमा छ ।"संग वैध वकील को शक्ति, आफ्नो एजेन्ट लिन सक्छन् कुनै पनि कार्य मा अनुमति दस्तावेज. अक्सर आफ्नो एजेन्ट पर्छ वर्तमान वास्तविक कागजात आह्वान गर्न शक्ति छ । उदाहरणका लागि, भने अर्को व्यक्ति आफ्नो तर्फबाट अभिनय बेच्न एउटा गाडी, मोटर वाहन विभाग साधारण आवश्यकता हुनेछ भन्ने वकील को शक्ति प्रस्तुत हुन अघि आफ्नो एजेन्ट अख्तियार साइन इन गर्न शीर्षक सम्मान गरिनेछ.
र वकील को शक्ति मा चीन
कम्पनीहरु संग प्रतिष्ठानबाट मा चीनकि सृष्टि गरेर स्थानीय लगानीकर्ताले वा विदेशीहरू गर्न सक्छन् नियुक्त प्रतिनिधित्व लागि तेस्रो पक्ष गर्न सकिन्छ जो एक व्यक्ति वा अर्को प्रकारको इकाइ छ । यस विषयमा वकील को एक शक्ति जारी हुनुपर्छ. दस्तावेज. जसको माध्यम नियुक्त व्यक्ति काम गर्न सक्छौं कम्पनी को तर्फबाट. वा अन्य व्यक्तिहरूलाई मा चिनियाँ इलाका हो । यो राम्रो छ भनेर थाह हाम्रो वकिल मा चीन प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्. कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनी संग एक वकील को शक्ति (नेपाली र चिनियाँ).
र पनि गर्न सक्छन् तपाईं मार्गदर्शन भर मुख्य कदम को तयारी को कागजातहरू छ । सबैभन्दा अक्सर.
त्यहाँ छन् अवस्थामा सम्बन्धित व्यापार विवाद जहाँ एक उपयुक्त कानूनी समर्थन र सल्लाह छलफल हुनुपर्छ.
"प्रश्नहरू सोधेर द्वारा, यो मान्छे बनाउन सक्छ देख्न, यो दोष को तर्क मा, को विरोधी छ ।"एक ठूलो वकील छ जो एक कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी लिन्छ आफ्नो ग्राहक गरेको मामला । काम एक वकील रूपमा समावेश व्यावहारिक आवेदन को सार कानूनी सिद्धान्त र ज्ञान समाधान गर्न विशिष्ट समस्या छ । यो सबै कुरा कसरी अभिनव आफ्नो वितरण को कानूनी सेवा छ । के गर्छ यो लिन सफल हुन कानूनी पेशा मा. यहाँ केही गुणहरू तपाईं विचार गर्नुपर्छ कि एक बन्न ठूलो वकील: को व्यावसायिक नीतिशास्त्र को कोड को वकिल एक राशि को सिद्धान्त अपनाए, रूपमा सेवा गर्दैछन् जो गर्न निर्देशन वकिल समयमा आफ्नो काम छ । यी सिद्धान्तहरू छन् अनुपालन मा सामान्य सिद्धान्त को व्यावसायिक नैतिकता को पट्टी छ । वकील मा स्वतन्त्र कार्यान्वयन आफ्नो दायित्व र उहाँले गरौं हुँदैन आफ्नो व्यक्तिगत चासो वा तेस्रो-पक्ष प्रभाव तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो दायित्वएक वकील छ अनुमति छैन को कुनै पनि उल्लंघन आफ्नो स्वतन्त्र छ । ग्राहक भरोसा पर्छ वा भरोसा मा आफ्नो वकिल र वकिल पर्याप्त हुनुपर्छ क्षमता प्राप्त गर्न को भरोसा आफ्नो ग्राहक र यो हासिल गर्न सकिन्छ भने मात्र वकील एक व्यक्तिगत मर्यादा, सम्मान, र निष्ठा । यो एक प्रारम्भिक र मौलिक अधिकार र दायित्व को वकील. बिना सिद्धान्त को विश्वसनीयता, त्यहाँ हुनेछ कुनै भरोसा र भरोसा बीच वकिल र ग्राहक । यो सिद्धान्त छैन समय सीमित छ र यो लागू हुन्छ भन्ने कुनै जानकारी वकील हुनेछ जानकारी ग्राहक द्वारा क्रियान्वित मा आफ्नो कानूनी पेशा हो । यो सिद्धान्त वकील आफूलाई अन्य पेशा वा गतिविधिहरु को एक विषय छैन जो संग जोडिएको एक कानूनी पेशा र उल्लंघन आफ्नो मर्यादा, स्वतन्त्रता, आदि. वकील विज्ञापन सक्दैन आफूलाई वा हेर्न को लागि एक व्यक्तिगत प्रचार मा एक अनुपयुक्त तरिका छ । उहाँले बनाउन सक्दैन कुनै पनि विज्ञापन प्राप्त गर्न अधिक ग्राहकहरु यो निषेध छ घोषणा मा आफ्नो वेबसाइट को नाम छ कि ग्राहकहरु थिए प्रतिनिधित्व वकील. वकील आवश्यक छ, काम गर्न चासो को आफ्नो ग्राहक । उहाँले राख्नु पर्छ चासो पहिले कोर्ट । ठूलो वकील छ जसले एक छ, एक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न न्याय आफ्नो ग्राहक को लागि, उहाँले मात्र बुझ्न को मामला तर पनि गाइड आफ्नो ग्राहक माध्यम कानूनी सिस्टम छ । उहाँले छ जो एक सजिलै बनाउन सबै मतभेद मा आफ्नो ग्राहक गरेको मामला । त्यहाँ धेरै लक्षण बनाउँछ कि एक सफल वकील. एक थाह हुनुपर्छ हरेक व्यवस्था (विशेष गरी क्षेत्र मा, तिनीहरूले हो, जहाँ काम), त्यहाँ हुनुपर्छ जो केही छोड छ. हुन एक ठूलो वकील तपाईं हल्कासित नलिनुहोस् हुँदैन लेखन कौशल आवश्यक छन् भनेर. वकिल को एक ठूलो सम्झौता खर्च गर्न आफ्नो समय मा दाखिल र अन्य कागजातहरू संग अदालत । तपाईं अधिक संभावना बनाउन एक राम्रो स्थिति आफ्नो ग्राहक को लागि तपाईं राम्रो लेखन कौशल छ । आफ्नो हुनु पर्छ सबै सामान्य नियम तल दिइएको छ: हरेक वकील आवश्यकता, एक अधिक अनुभवी व्यक्ति गर्न उहाँलाई डोऱ्याउन र यो बन्न आवश्यक छ एक ठूलो वकील, बिना कुनै उचित निर्देशन मा आफैलाई राखे गुणात्मक काम, र यो तपाईंलाई मदत गर्नेछ आफ्नो मामला प्रस्तुत मा सबैभन्दा बहुमूल्य. बन्न एक ठूलो वकील तपाईं अधिक हुनुपर्छ भद्र, रोगी र आदरणीय तिर आफ्नो ग्राहक, न्याय, सहयोगिहरु, अदालत कर्मचारी आदि. आफ्नो व्यावसायिकता निर्भर तपाईं कसरी आफूलाई प्रस्तुत अदालत मा, तपाईं गर्नुपर्छ धेरै सावधान हुन तिर आफ्नो व्यवहार । आफ्नो व्यवहार बुझाउँछ, आफ्नो व्यक्तित्व बन्न, एक ठूलो वकील तपाईं कसरी सिक्नुपर्छ काम र प्रतिक्रिया देखाए गर्न विभिन्न परिस्थितिमा छ । कानूनी चिकित्सकहरु, नैतिकता लिन्छ अर्को स्तर को महत्त्व । एक व्यावसायिक रूप, तपाईं खोज्नुपर्छ कायम गर्न उच्चतम मानक को इमानदारिता, निष्ठा, निष्पक्षता मा आफ्नो व्यवहारको. छैन जानकारी खुलासा तपाईं दिइएको गरेर आफ्नो, जानकारी प्रदान गर्न अदालत जो आवश्यक छ र मात्र हदसम्म तपाईं त्यसो गर्न आवश्यक छ । हरेक राज्य को एक सेट छ कि नियम शासन एक वकील गरेको व्यवहार । यी नियमहरू पालन अन्यथा तपाईं भइरहेको जोखिम चलान अनुशासित, जो हुन सक्छ मा एक निलम्बन वा खारेजी को आफ्नो लाइसेन्स । भने एक अपराध प्रतिबद्ध छ द्वारा, तपाईं मात्र तपाईं गर्न विषय हुनेछ, दण्ड, तर पनि व्यावसायिक आचरणमा. को प्रकृति मा निर्भर गर्दछ, एक अपराध. हुन एक ठूलो वकील यो आवश्यक छैन छ तथ्याङ्कले । त्यसैले हुनुपर्छ, आफैलाई बनाउन सबै भन्दा राम्रो मा आफ्नो काम, लागि तयार हुन हरेक प्रकारको अवस्था । एक वकिल हुन जसलाई सबैले भर पर्न सक्छौं भन्दा पहिले आफ्नो मामला । छन् वकिल जसले आफूलाई विचार सफल जब तिनीहरूले एक साथी मा उच्च-संचालित व्यवस्था कडा, केही खुसी छन् जीवित मा आफ्नो एकल प्रचलन, केही अन्य विचार गैर-मुनाफा वा सार्वजनिक चासो गर्न काम हुन सफलता गर्न महत्वपूर्ण छ । अन्त मा, एक हुनेछ, एक ठूलो वकील छ, जसले मुर्दा गाड्नु गर्न आफूलाई मा यो अवस्थामा उहाँले देखिंदा छ र विश्लेषण, मूल्यांकन र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्न.
तनाव र व्यवस्थापन मा यो एक दिन-देखि-दिन आधारमा । यो चरण तपाईं को लागि अनुमति हुनेछ लाग्छ अधिक शान्तपूर्वक र स्पष्ट हुनेछ जो धेरै फलदायी आफ्नो क्यारियर लागि.
हुन भावुक तिर आफ्नो क्यारियर आनन्दित, आफ्नो पेशा अनुमति छैन तपाईं महसुस गर्न बोझ र तपाईं सिक्न हुनेछ हरेक समय नयाँ कुरा संग आफ्नो अनुभव पछुतो कहिल्यै, आफ्नो विकल्प छ । एक ठूलो वकील एक दिनुहुने एक सय आफ्नो आफ्नो पेशा कुनै पनि बिना कुनै हिचकिचाहट र डर भित्र । ट्रयाक राख्न प्रश्न तपाईं सोध्न चाहनुहुन्छ, अंक तपाईं चाहनुहुन्छ मा राख्न तर्क र तथ्य तिनीहरूलाई रेकर्ड मा एक परीक्षण नोटबुक । तयारी एक परीक्षण नोटबुक को एक छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यो समावेश सबै कुराहरू जो तपाईं आवश्यक समयमा परीक्षण. आफ्नो नोटबुक प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ विशेष आवश्यकता को मामला छ । परीक्षण नोटबुक समावेश गर्नुपर्छ: एक पटक तपाईं फाइल आवश्यक कागजात सम्बन्धित आफ्नो मामला मा, तपाईं एक नम्बर सामना गर्नेछ. जब मामला सुने द्वारा न्यायपीठ उहाँले भन्नेछु आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको के प्रमाण छ. तपाईं शुरू मा परीक्षण छ । बनाउन उचित टिप्पणीहरू यी र ठूलो वकील धेरै तत्व भनेर एक ठूलो वकील आवश्यकता साबित गर्न क्रम मा जीत । अगाडी योजना गर्न ध्यान गर्न निश्चित छ कि तपाईं प्रमाणित गर्न सक्छन् हरेक एकल तत्व को आफ्नो मामला छ, र तपाईं गर्न सक्षम हुनुपर्छ अस्वीकार गर्नु तत्व को आफ्नो विपक्षी गर्न । तपाईं बाहिर आंकडा गर्न सक्छन् जो प्रमाण गर्न तपाईंलाई मदत गर्नेछ प्रमाणित तथ्य हो । नियम को प्रमाण हुनेछ कि निर्धारण मा एक विशेष कागजात, कथन छ, स्वीकार गर्न सकिने मा अदालत वा छैन । तपाईं तयार हुनुपर्छ पर्याप्त अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ प्रमाण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ. तपाईं जीत । विरोधी र विशेष गरी न्याय तपाईं एक मौका प्राप्त गर्न, आफैलाई प्रतिनिधित्व, त्यसैले रोगी हुन र सुन्न विपरीत पार्टी ध्यान । एक प्रस्तुति छ जो मौखिक गरेको कानूनी मुद्दाहरू वा समस्या पहिले एक न्यायाधीश विरुद्ध एक विरोध सल्लाह छ । यो एउटा गतिविधि मा गरेको व्यवस्था स्कूल । यो निर्माण मा मदत गर्छ माथि भरोसा र मदत गर्न कसरी थाहा गर्न वर्तमान मामला अघि न्याय. नक्कली परीक्षा प्रदान गर्न ठूलो अवसर आफ्नो गल्ती सिक्न बन्ने अघि एक वकील. केही पेशेवरों सक्छ लाग्छ, यो पर्याप्त छ गर्न सकिन्छ, एक राम्रो वकील जहाँ तथ्यलाई छ, यो मात्र पर्याप्त छैन आज परिदृश्य गर्न बस एक राम्रो वकील. एक ठूलो वकील बढी रचनात्मक छ, र कहिल्यै बाधा आफ्नो विरोधी र न्याय छ । उहाँले भएको छ एक क्षमता गर्न तार्किक लाग्छ, सधैं राम्रो अनुसन्धान, र विश्लेषणात्मक कौशल. उहाँले थाह स्थापना गर्न कसरी संग राम्रो सम्बन्ध अदालत र अन्य शरीर र आफ्नो मर्यादा कायम छ । यो आवश्यक छ, संग इमानदार हुन यो अदालत, सहयोगिहरु र ग्राहकहरु. एक ठूलो वकील थाह छ, धेरै राम्रो तरिकाले गर्न कसरी प्रश्न साक्षी कायम र को उच्च स्तर नैतिकता छ ।.
राज्य परिषद को चीन को जनता गणतन्त्र
अझ बढी सिक्न, को विभिन्न प्रकार को चिनियाँ भिसा लागि विदेशी नागरिकहरु कसरी, लागू गर्न, र बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू. वरिष्ठ-स्तर कर्मचारीहरु गर्नुपर्छ पनि लागू लागि एक विदेशी विशेषज्ञ प्रमाणपत्र । प्रीमियर ली भन्नुभयो ठूलो बोनस हुनुपर्छ वितरित गर्न उद्यम देखि कर कटौती तिनीहरूलाई मदत गर्न उत्पादन विस्तारप्रीमियर ली भन्नुभयो सरकारले पर्छ छुटाउन प्रतिज्ञा कम को सामाजिक बीमा प्रिमियम भुक्तानी हाकिमहरूले छ । भर्खरै पारित गरेको विदेशी लगानी व्यवस्था हुनेछ मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम एक राम्रो व्यापार वातावरण मा चीन छ । यात्रा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र हुन सक्छ चाँडै, धेरै सजिलो भएको छ । विशाल पूर्वाधार परियोजनाहरु शुरू पछिल्लो दशक भित्र अब सिद्धिनै लागेको छ । राज्य परिषद छ, भन्नुभयो यो सुधार र अनुमोदन सिस्टम को निर्माण परियोजनाहरू अनुसार, एक परिपत्र. चीन मर्ज हुनेछ बीमा लागि आधारभूत स्वास्थ्य र प्रसूति अनुसार, एक कागजात देखि राज्य परिषद ।.
चोङ्किङ् नगर पर्यटन प्रशासन
अन्तर्गत चोङ्किङ् नगरपालिका सरकारचोङ्किङ् नगर पर्यटन प्रशासन लागि जिम्मेवार छ. पर्यटन व्यवस्थापन को चोङ्किङ् शहर । संगठित प्रचार र महत्वपूर्ण पदोन्नति को पर्यटन छवि शहर को चिन्ह अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्झौता तर्फबाट नगर सरकार । रेखदेख र निरीक्षण पर्यटन बजार क्रम र सेवा गुणहरू प्रशासनिक र व्यवहार को प्रशासनिक कार्यवाही ।. संगठित र पुस्तिका को विकास को महत्त्वपूर्ण पर्यटन उत्पादनहरु पुस्तिका र समन्वय प्रमुख पर्यटन पर्व र पर्यटन लेनदेन । बनाउन पर्यटन शिक्षा योजना को सारा शहर. संगठित र निर्देशन पर्यटन शिक्षा निर्देशन व्यावसायिक योग्यता परीक्षा र ग्रेड मूल्यांकन को पर्यटन पेशा हो ।.
चीन दिवालियापन व्यवस्था
नयाँ चिनियाँ दिवालियापन व्यवस्था प्रभाव गए जुन उहाँले पढ्न अमेरिकी दिवालियापन अवस्थामा र निर्देशन लागि म भविष्यवाणी चीनको अदालतमा पनि हुनेछ देख गर्न विदेशी वकिल, र अवस्थामा सहयोगका लागि सँभाल्दै मा यसको दिवालियापन अवस्थामा, कम से कम, सुरुमाकिनभने यति धेरै नयाँ व्यवस्था छ मा अमेरिकी व्यवस्था, चिनियाँ वकिल संग जसलाई हामी चीन मा काम हामीलाई बताइरहेका छन् तिनीहरूले आशा अमेरिकी व्यवस्था गर्न अग्रणी भूमिका खेल्न को अर्थ नयाँ दिवालियापन व्यवस्था छ । नोट: यो धेरै पोस्ट र जानकारी को लागि यो द्वारा लेखिएको थियो ट्रैविस, हाम्रो गर्मी साथीहरूले निवासी हाल किंगदाओ मा. म ज्यादातर प्रतिनिधित्व कम्पनीहरु व्यापार गरिरहेको मा उदीयमान बजार देशहरू यो लिया छ मलाई धेरै वर्ष निर्माण गर्न मेरो नेटवर्क र यो लिन्छ लगातार संचार र यात्रा गर्न यो कायम छ । मेरो काम भएको छ रूपमा अंतर रहन्थ्यो रूपमा सुरक्षित रिलीज को दुई अनुचित आयोजित हेलिकप्टर मा पपुवा न्यू गिनी, सेट अप एक कानूनी रूपरेखा सार्न क्यानाडा देखि पोल्याण्ड गरेको भित्री, निरीक्षण सयौं मुद्दा र मध्यस्थता मामला मा कोरिया, कसैले मदत जोगिन आतंकवाद आरोप मा जापान, र नहट्ने माछा उत्पादन मा चीन मा सङ्कलन गर्न एक ऋण । म रूपमा नाउँ थियो एक मात्र तीन वाशिंगटन राज्य अचम्मको वकिल मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, द्वारा मूल्याङ्कित - व्यवस्था निर्देशिका (यसको उच्चतम दर्जा), रेटेड. यो वेबसाइट (यसको उच्चतम दर्जा), र म एक सुपर वकील म हुँ एक बारम्बार लेखक र सार्वजनिक वक्ताले मा व्यापार गरिरहेको मा एशिया र म निरन्तर यात्रा बीच संयुक्त राज्य अमेरिका र एशिया. म सबैभन्दा सामान्यतः बोल्न चीन मा व्यवस्था मुद्दाहरू र म छु नेतृत्व लेखक को पुरस्कार विजेता चीन व्यवस्था. फोर्ब्स पत्रिका, भाग्य पत्रिका, वाल स्ट्रीट जर्नल, निवेशक व्यवसाय दैनिक, व्यापार हप्ताको, राष्ट्रिय कानून पत्रिका वाशिंगटन पोस्ट, जर्नल, अर्थशास्त्री, न्युजवीक, यो न्यूयोर्क टाइम्स र भित्र सल्लाह छ सबै अन्तरवार्ता मलाई सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरू मेरो अन्तर्राष्ट्रिय कानून अभ्यास । मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था टीम मा मेरो दृढ, म ध्यान सेट मा दर्ता कम्पनीहरु, विदेशी मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय ठेके (अनुबंध, लाइसेन्स, वितरण, आदि), सुरक्षा आईपी (ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, कपीराइट र पेटेंट), र निरीक्षण एम र एक लेनदेन छ । हामी छलफल गरिनेछ व्यावहारिक पक्षलाई चिनियाँ व्यवस्था र कसरी यो प्रभावहरु व्यापार त्यहाँ छ । हामी हुनेछ तपाईं बताउन के काम गर्दछ र कुन छैन र तपाईं के गर्न सक्छन् प्रयोग गर्न के व्यवस्था गर्न आफ्नो फाइदा छ । हाम्रो उद्देश्य सहयोग कारोबार पहिले नै चीन वा योजना गर्न जान छैन, चीन मा नयाँ जमीन तोड कानूनी सिद्धान्त वा नीति. हाम्रो गहिरो ज्ञान को चीनको कानूनी प्रणाली, संस्कृति, र व्यापार जलवायु बनाउन हाम्रो चीन अभ्यास सबैभन्दा परिष्कृत मा हामीलाई । हाम्रो वकिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा कमाएका लागि प्रदान काटन-किनारा कानूनी समाधान गर्न अमेरिकी - र विदेशी आधारित कम्पनीहरु मा व्यापार गरिरहेको वा चीन संग. हाम्रो विशाल अनुभव हैंडलिंग चीन-खास इकाइ गठन, ठेके, बौद्धिक सम्पत्ति मामिलामा, र विवाद संकल्प दिन्छ, हाम्रो ग्राहकहरु को सुरक्षा थाह पाउँदा तिनीहरूले एक साँच्चै अनुभवी कानूनी टीम पछि तिनीहरूलाई ।.
पासपोर्ट सेवा - अमेरिकी दूतावास मा चीन
अमेरिकी राजदूत मानिसहरू' गणतन्त्र चीन को टेरी र आफ्नो परिवार मा आइपुगे छन् चीन । पासपोर्ट आवेदन मा गरिनु पर्छ व्यक्ति मा अमेरिकी नागरिक सेवा एकाइ को दूतावास रभने आवेदक एक सामान्य छ, यो सामान्य आवश्यकता देखा संग आफ्नो वा उनको आमाबाबुले रूपमा राम्रो तरिकाले. नयाँ पासपोर्ट साधारण मा जारी दुई चार सप्ताह पछि आवेदन र नयाँ पासपोर्ट कार्ड छ आठ हप्ता पछि आवेदन छ । यी पासपोर्ट र पासपोर्ट कार्ड मुद्रित छन् संयुक्त राज्य अमेरिका र वितरित गर्न चीन मार्फत एक कुरियर सेवा । फलस्वरूप, कारण गर्न उत्पादन वा वितरण कारक यो लिन सक्छ निकै लामो प्राप्त गर्न एक वा अन्य. सीमित मान्यता आपतकालीन पासपोर्ट जारी हुन सक्छ मा विशेष परिस्थितिमा छ । पछि तपाईं आवेदन भर्नका, यो ल्याउन र यो संग तपाईं को दिन आफ्नो नियुक्ति ।. कृपया भनेर सम्झाउन तीब्रता सेवा मात्र उपलब्ध छ भने, तपाईं एक पासपोर्ट लागि लागू अमेरिका मा महत्त्वपूर्ण निर्देशन लागि सबै आवेदकहरुको राहदानी: - कृपया बाहिर मुद्रण र मात्र एक-पक्षिय पृष्ठ को आवेदन. - आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर, यदि तपाईँले जारी गरिएको छ एक अनुसार. नयाँ पासपोर्ट साधारण को लागि उपलब्ध छनौटको भित्र दुई वा चार सप्ताह को आफ्नो आवेदन छ । तपाईं प्राप्त हुनेछ ईमेल दूतावास वा कन्सुलर जहाँ तपाईं लागू गर्दा आफ्नो पासपोर्ट तयार छ । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, मा आउन व्यक्ति, लागि प्रतीक्षा कृपया हाम्रो ई-मेल कि तपाईं सूचित आफ्नो पासपोर्ट तयार छ लागि टिप्न-अप गर्न । कृपया याद गर्नुहोस् कि पकड हुनेछ आफ्नो नयाँ पासपोर्ट को लागि माथि गर्न दिन. फर्कन असमर्थ दूतावास वा कन्सुलर माथि टिप्न आफ्नो पासपोर्ट, प्राधिकरण एक मित्र वा परिवारको सदस्य सङ्कलन गर्न देखि यो आफ्नो तर्फबाट. आफ्नो तिरेको रसिद, हालको पासपोर्ट, र हस्ताक्षर प्रमाणीकरण पत्र मा लेखिएको अंग्रेजी द्वारा प्रस्तुत हुनुपर्छ आफ्नो मित्र वा परिवार सदस्य लागि गर्न जारी पासपोर्ट छ । पासपोर्ट नविकरण लागि बच्चाहरु उमेर - तपाईं लागि लागू हुन सक्छ आफ्नो बच्चाको पासपोर्ट यस पेज मा भने: पासपोर्ट नविकरण वयस्क लागि - तपाईं लागि लागू हुन सक्छ आफ्नो पासपोर्ट यस पेज मा भने: ठाँउ हराएको चोरी चिनियाँ भिसा निम्न कागजातहरू आवश्यक छन्, निकास र प्रविष्टि ब्यूरो(.) सुविधा को जारी एक नयाँ चिनियाँ भिसा प्रतिस्थापन गर्न, हराएको चोरिएको भिसा छ ।. यो पुष्टि रिपोर्ट को हानि को पासपोर्ट पहिले द्वारा जारी.
नोट: यो निकास र प्रविष्टि ब्यूरो (.) को एकमात्र विवेकी आवश्यकता अतिरिक्त कागजात छैन, माथि सूचीबद्ध सुविधा क्रम मा जारी एक नयाँ चिनियाँ भिसा छ । महत्त्वपूर्ण टिप्पणी.
चाहिन्छ कि विदेशी नागरिक पहिलो प्रतिवेदन पासपोर्ट रूपमा हराएको चोरी मा. जानुअघि आफ्नो सम्बन्धित दूतावास प्राप्त गर्न एक प्रतिस्थापन पासपोर्ट छ । यदि एउटा विदेशीले प्रस्तुत प्रतिस्थापन पासपोर्ट बिना पहिलो भएको रिपोर्ट पासपोर्ट रूपमा हराएको चोरी गर्न. मुद्दा छैन चिनियाँ भिसा एक नियमित आधार मा बाहिर भर्न आफ्नो पासपोर्ट आवेदन, हाम्रो कार्यालय । यो निकै कम समय खर्च गर्न छ मा कार्यालय । यदि आफ्नो नाम भएको छ कानुनी परिवर्तन कारण विवाह गर्न वा एक अदालत को आदेश एक वर्ष भित्र को मिति देखि जारी पासपोर्ट, त्यसपछि तपाईं आवश्यक हुनेछ: ल्याउन एक पूरा फारम, आवेदन लागि एक अमेरिकी पासपोर्ट: नाम परिवर्तन, डाटा सुधार, र सीमित पासपोर्ट पुस्तक प्रतिस्थापन फारम, एक प्रमाणित प्रतिलिपि को आफ्नो विवाह प्रमाणपत्र वा आफ्नो नाम परिवर्तन अदालतले उर्दी, एक हाल रंग फोटो संग सेतो पृष्ठभूमि (इन्च गरेर दुई इन्च), र आफ्नो वर्तमान मान्य पासपोर्ट छ । फोटोकपी र प्रतिलिपिहरू छन् स्वीकार्य छैन लागि पासपोर्ट उद्देश्य छ । यदि आफ्नो नाम भएको छ कानुनी परिवर्तन कारण विवाह गर्न वा एक अदालत को आदेश भन्दा बढी एक वर्ष रूप जारी को मिति पासपोर्ट, त्यसपछि तपाईं को आवश्यकता हुनेछ पेश गर्न फारम - छ जो पासपोर्ट नविकरण वयस्क लागि र तिर्न वा बराबर छ । यदि तपाईं खोज मुद्रण त्रुटि (एक हिज्जे त्रुटि वा गलत जन्म मिति) मा आफ्नो पासपोर्ट, त्यसपछि तपाईं को आवश्यकता हुनेछ ल्याउन एक पूर्ण फारम, आवेदन लागि एक अमेरिकी पासपोर्ट: नाम परिवर्तन, डाटा सुधार, र सीमित पासपोर्ट पुस्तक प्रतिस्थापन फारम, एक फोटोकपी आफ्नो अमेरिका पासपोर्ट, र एक हाल रंग फोटो संग सेतो पृष्ठभूमि (इन्च गरेर दुई इन्च). नोट: कृपया बाहिर मुद्रण र मात्र एक-पक्षिय पृष्ठ को रूप मा. को रूपमा, फेब्रुअरी, अमेरिकी व्यवस्था आवश्यकता दुवै आमाबाबुले को पासपोर्ट आवेदकहरुको को उमेर अन्तर्गत सोह्र सहमति गर्न लेखन मा लघु गरेको पासपोर्ट जारी छ । भने मात्र एक आमाबाबुले छ, वर्तमान को समय मा लघु गरेको पासपोर्ट आवेदन, अनुपस्थित आमाबाबुले गरेको फारम - लिखित वक्तव्य को सहमति (सहित बच्चाको नाम र जन्म मिति, साथै एक प्रतिलिपि को आमाबाबुले गरेको वैद्य, सरकार-जारी पहिचान) प्राधिकृत पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक छ । गर्नुपर्छ एक आमाबाबुले छ, एकमात्र कानूनी अख्तियार लागि लागू गर्न एक सानो पासपोर्ट, एक अदालत को आदेश दिंदा एकमात्र जिम्मा लागू बाबुआमा वा प्रमाणित प्रतिलिपि को अन्य आमाबाबुले मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत हुनुपर्छ मा समय को आवेदन. अमेरिकी अदालत-जारी कागजातहरू वा चिनियाँ सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्र देखाउने एक आमाबाबुले छ, शारीरिक बच्चा को जिम्मा गर्न अपर्याप्त छ साबित एकमात्र कानूनी जिम्मा छैन । धेरै अवस्थामा, हामी सोध्न सक्छ लागि - गरेको को सहमति, फारम, वा आफ्नो उनको लिखित बयान गर्न राजी पासपोर्ट जारी छ । सबै विदेशी कागजातहरू द्वारा हुनुपर्छ एक अंग्रेजी अनुवाद छ । एशियाली-प्रशान्त क्षेत्र, धेरै देशहरू आवश्यकता आफ्नो अमेरिका पासपोर्ट कम्तिमा छ महिना मान्यता बाँकी मा यो को जारी लागि एक भिसा वा यात्रा लागि आफ्नो देश । केही एयरलाइन्स अनुमति छैन संग यात्रु को भन्दा कम छ महिना पासपोर्ट मान्यता बोर्ड गर्न आफ्नो टिकट छ । अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर सक्दैन आवश्यकता, अन्य देशका प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ छैन भने तपाईं भेट्न आफ्नो निकास प्रविष्टि आवश्यकताहरु । लागि थप जानकारी को सन्दर्भमा प्रविष्टि र निकास आवश्यकताहरु, हेर्न देश विशिष्ट यात्रा आवश्यकताहरु । यदि आफ्नो यात्रा योजना ढिला भएको कारण पासपोर्ट मान्यता आवश्यकताहरु, तपाईं आवश्यक हुनेछ नविकरण गर्न आफ्नो पासपोर्ट छ । तत्काल को लागि र वा जरुरी यात्रा, तल निर्देशन पालन गर्नुहोस्. तपाईं जारी गरिनेछ एक सीमित मान्यता पासपोर्ट संग एक सिद्धिने दिनांक आधारित आफ्नो विशिष्ट यात्रा अवस्था । तपाईं छैन भने जरुरी यात्रा र तपाईं गर्न सक्षम छन्, प्रतीक्षा दस व्यापार दिन को लागि आफ्नो नयाँ पासपोर्ट पुग्न गर्नुहोस् एक नियुक्ति बनाउन अनलाइन र उल्लेख गर्न पासपोर्ट नवीकरण निर्देशन औंल्याएको वयस्क पासपोर्ट र सानातिना पासपोर्ट छ ।.
चीन, जरिवाना, दण्ड, असल, समाधान गर्न कसरी
पनि भनिन्छ अवैध निवास, अर्थ रहेको एक एक देश मा पछि आफ्नो उनको भिसा वा निवास परमिट म्याद समाप्त भएको छ । भने एक विदेशी कुल लम्बाइ मा रहन चीन नाघ्यो नियुक्त समय मा भिसा छ, यो गर्न बुझयो हुनेछ भिषा छन्. देखि रहन लम्बाइ मा चीन गन्न देखि: अर्को बिहान निम्न प्रविष्टि मिति भने विदेशीले पात, उहाँले हुनेछ छन्, आफ्नो भिसा गरेर तीन दिन । याद गर्नुहोस् कि यदि निर्धारित समय मा आफ्नो प्रस्थान टिकट पछि भन्दा आफ्नो भिषा गरेको समाप्ति समय मा, भने पनि तपाईं माध्यम जान अध्यागमन निरीक्षण अघि भिषा समाप्ति समय छ । तर, यदि तपाईंको निर्धारित प्रस्थान समय भिषा समाप्ति समय, तर वाहक परिवर्तन तालिका मा, तपाईं छैन आफ्नो भिषा छन्अनुसार वर्तमान नीति, त्यहाँ छ कुनै ग्रेस अवधि लागि अवैध परदेशी मा त, चीन आफ्नो भिषा सिफारिश छैन । तथापि, आफ्नो चीन भिसा लागि मात्र एक वा दुई दिन, जान निकास र प्रवेश प्रशासन को स्थानीय (सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो) माफी माग्न र कारण व्याख्या । यस मामला मा, तिर्न आवश्यक छैन, ठीक छ । वर्तमान आधारित अध्यागमन नियमहरु छन्, विभिन्न सजाय गर्न विदेशीहरू अनुसार को लम्बाइ हो । परदेशी भिसा वा निवास परमिट छोटो अवधिको लागि गरिनेछ चेतावनी दिइएको र तिर्न आवश्यक हुन राम्रो छ । सामान्यतया, यो दण्ड छ दिन प्रति छैन अधिक. भने एक भिसा लागि एक महत्वपूर्ण अवधि, सामान्यतया एक महिना भन्दा बढी, उहाँले हुन सक्छ मा राखे एक निरोध शिविरमा लागि पाँच पन्ध्र दिन र गर्न आफ्नो घर देश । यो सम्भव छ उहाँले कालो सूचीमा गरिनेछ, असर गर्नेछ जो आफ्नो पुन प्रवेश गर्न चीन, र उहाँले हुन सक्छ प्रवेश देखि निषेध देश लागि दस वर्ष । यस अलावा, यो पनि हुन सक्छ प्रभाव एक भिसा आवेदन लागि अन्य देशहरू. तपाईं आफ्नो भिषा छन् मुख्य भूमि चीन मा, तपाईं रिपोर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो अवस्था, स्थानीय प्रहरी चौकी गर्न शिघ्रतिशिघ्र, राम्रो तिर्न, र त्यसपछि एक लागि लागू परमिट देश छोड्न. रोक्न आदेश मा अन्जानमा, तपाईं सम्झनुपर्छ को आफ्नो मिति प्रवेश देश र यसबाहेक, तपाईं कसरी सिक्नुपर्छ गणना गर्न रहन को लम्बाइ । समझ कि रहन लम्बाइ गन्न देखि अर्को दिन महत्वपूर्ण छ रोक्न मा चीन. साथै, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने अब रहन, तपाईं एक लागि लागू गर्न त्यो दिइएको थियो चौध दिन भिसा एक पर्यटक रूपमा तर त्यो अब र एक महिना पहिले चीन मा, के हुनेछ त्यो के गर्न सक्छ अब त्यो चाहन्छ जान घर फिलिपिन्स मा, मदत कृपया मेरो मित्र त्यो आवश्यकता केही सल्लाह गर्न कृपया, सोच्छ त्यो के गर्नुपर्छ वर्तमान मा रिपोर्ट छ उनको अवस्था स्थानीय प्रहरी चौकी गर्न, र त्यसपछि तिर्न राम्रो प्रति दिन राशि छैन अधिक, स्वीकार र अन्य दस्तुर । पछि, त्यो एक लागि लागू गर्न निकास पारित गर्न चीन छोड्न. पछि तिर्ने असल, मुख्य भूमि चीन । शायद तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ लागू गर्न को लागि अर्को भिसा तपाईं फर्कन चाहनुहुन्छ भने. मेरो कान्छो भाइ किंगदाओ गए प्रांत मा चीन मा दिनांक मार्च लागि आफ्नो अध्ययन मा किंगदाओ विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी को छ । तर आफ्नो कागज केही समस्या कारण एजेन्सी दोष र प्रहरी उहाँलाई पक्रन. के हुनेछ आफ्नो दण्ड र कसरी लामो समय को यो हुनेछ जारी गर्न उहाँलाई? छ, प्रहरी फिर्ता पठाउन उहाँलाई. पहिले सात दिन बितिसकेको छ । कति उहाँले तिर्न आवश्यक छ, प्रहरी । कृपया सुझाव छ । यदि आफ्नो भाइ मुख्य भूमि चीन मा एक निश्चित समय, उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ असल, निरोध लागि पन्ध्र दिन, म ठान्नु । उहाँले तीस दिन भिसा जब उहाँले प्रविष्ट चीन । आफ्नो भिसा मा यस्को अवधि समाप्त हुनेछ अप्रिल । भने प्रहरीले जारी हुनेछ उहाँलाई भित्र आफ्नो भिसा अवधि, त्यसपछि के हुनेछ संग, मेरो भाइ । तिनीहरूले भने कि तिनीहरू.
सामान्यतया कसरी लामो हुनेछ समय जांच गर्न यी प्रकार को मामला साथै चिनियाँ प्रहरीले जानकारी दूतावास भनेर उहाँले धोखाधडी भिसा छ । तर उहाँले छ भने, यो धोखाधडी भिसा त्यसपछि सक्छ कसरी उहाँले प्रविष्ट चीन मा माध्यम विमानस्थल सुरक्षा । यदि म दिइएको थियो दस दिन पाउन एक नयाँ स्कूल वा निकास र म थिएन, अब म गरिएको छ चीन मा पाँच महिना लागि कुनै स्कूल कुनै काम तर मेरो विद्यार्थी भिसा अझै पनि मान्य छ र म बाहिर निस्कन आवश्यक छ । के हुन्छ सजाय? यदि तपाईं छन् मुख्य भूमि चीन मा, तपाईं मानिन्छ स्वीकार गर्न ठीक पाँच सय प्रति दिन, तर राशि छैन अधिक, र अन्य दस्तुर । साथै राम्रो, पाँच महिना धेरै संभावना छ परिणाम मा निरोध मा केही ठूलो नगरपालिका हो ।, त्यसपछि तपाईं प्राप्त छैन छोड्न ।.
को सही स्वामित्व कानूनी संस्थाहरुको: कसरी छ पठाइएको छ जो
एक कानूनी इकाइ, परिभाषा द्वारा छन्, सृष्टि हुन को स्वतन्त्र बजार वा सार्वजनिक सम्बन्ध सही निजी स्वामित्व कानूनी संस्थाहरुको इरादा छ सुनिश्चित गर्न मुख्यतया को गतिविधिलाई को यो पलाउँछ कानूनी आवश्यकताहरु को एक कानूनी इकाइ हो स्वामित्व छ । धेरै देशहरुमा अनिवार्य अवस्था को गठन को लागि एक कम्पनी को अस्तित्व को एक सामाग्री प्रावधान - शेयर राजधानी वा सम्पत्ति र आकार को यो वित्तीय समर्थन, एक रूपमा शासन, मात्र एक तल सीमाना छ । कि छ, सही को स्वामित्व कानूनी संस्थाहरुको भन्ने बुझाउँछ माथिल्लो सीमा सेट छैन (तिनीहरू द्वारा, परिभाषा, हुन सक्दैन), जबकि न्यूनतम स्तर को चार्टर राजधानी सधैं फरक छ (एक पाउन्ड र बेलायत मा हजारौं को दसौं को यूरो, भन्न, जर्मनी मा)प्रजालाई को सम्पत्ति अधिकार को कानूनी संस्थाहरुको - वा कानूनी अस्तित्व नै छ वा यसको सम्बद्ध, प्रभाग, सहायक । सुनिश्चित गर्न, पूरा को दायित्व को कानूनी संस्थाहरुको पनि निर्धारण को मौद्रिक मूल्य र सम्पत्ति छ । उदाहरणका लागि, सिद्धान्त मा अधिकार को स्वामित्व कानूनी संस्थाहरुको पनि लागू गर्न"थाह-कसरी' को ज्ञान, अनुभव, थाह-कसरी, बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि । तर, सम्पत्ति हुन सक्दैन मात्र सम्पत्ति छ । यी उपाय हो इरादा हटाउन दुरुपयोग र शिक्षा संगठन, काल्पनिक, कपटपूर्ण कम्पनीहरु मा लिएर दायित्व, जो स्पष्ट हुनेछैन प्रदर्शन गर्न सक्षम छ रूपमा तिनीहरूले कमी उपयुक्त वित्तीय समर्थन छ । भने एक कानूनी इकाइ कार्य, बजार मा मुनाफा उत्पन्न हुन सक्छ, जो बीच विभाजित, मालिक, मालिक, त्यसपछि सबै कुरा हुन्छ संगठन (सहित भूमि, सम्पत्ति, गाडी, उपकरण, सही को दाबी, बैंक खाता, आदि.) वा प्राप्त देखि व्यक्तिहरूलाई र कानूनी संस्थाहरुको - रहेको उनको सम्पत्ति छ । अधिक जटिल मामला छ जब संगठन हुन्छ ऋण तिर्न नसक्ने र गर्न बाध्य भइरहेका प्रक्रिया को दिवालियापन । यस अवस्थामा, विशेष महत्त्व छ को सही स्वामित्व छ । कानूनी व्यक्ति छैन चासो स्वचालित स्थानान्तरण को स्वामित्व कम्पनी को गर्न सकिन्छ, जो व्यक्तिहरूले. पहिलो, सम्पत्ति संगठन को मूल्यांकन छ, त्यसपछि गठन भएको एक जन प्रतिस्पर्धी, जो मुख्यतया भइ ऋण र दायित्व. र मात्र कि राशि रहेको जो पछि भुक्तान को सबै ऋण (परिसमापन कोटा) क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ लागि पैसा वा सम्पत्ति बराबर सम्पत्ति को मालिक छ जो एक प्राकृतिक व्यक्ति थियो जसले पहिले सरुवा आफ्नो स्वामित्व एक कानूनी इकाइ छ । यदि हामी कुरा गर्दै गैर-मुनाफा संगठन (मूल सिर्जना छैन मुनाफा लागि), त्यसपछि फिर्ता प्राप्त गर्न योगदान वा सरुवा गर्न सम्पत्ति एक निजी व्यक्ति सक्दैन.
रही आफ्नो चालक लाइसेन्स मा चीन - विदेशी पर्यटकको
सबै भन्दा राम्रो सल्लाह लागि प्राप्त गर्न चाहने, आफ्नो चालक अनुमतिपत्र चीन सरल छ । छैन । चीन ड्राइभिङ, एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय र अक्सर लाग्न अधिक यस्तै एक साँचो रक्त खेल वा शारीरिक खेल को"चिकन"भन्दा एक तरिका रही को बिन्दु गर्न बिन्दु एक देखि बी यो मा जस्तै अमेरिका, जहाँ एक ड्राइव गर्न सक्छन् मा उच्च गति मा सीधा लाइनहरु मा राम्रो-राखिएको सडक, ठूलो खतराको भइरहेको, अहङ्कारको, र गति नै छ । चीन मा, तपाईं हेर्न को एक फरक प्रकारको आक्रमण र धेरै अवस्थामा चालक र अकुशलयद्यपि, तपाईं के प्राप्त गर्न पाङ्ग्रा पछि छन्, केही सरल होस सजग हुन र यो छ सबै भन्दा राम्रो गर्न यो सम्झना सरल औंठी को नियम: यो छ भने तपाईं भन्दा ठूलो, त्यसपछि बाटो बाहिर प्राप्त. पहिलो कुरा सम्झना गर्न छ कि लाइनहरु मा सडक छन् लागि सामान्य सन्दर्भ लागि मात्र. तपाईं के भने तिनीहरूलाई पालन कडाई रूपमा, पश्चिम मा, तपाईं हुनेछ कहिल्यै प्राप्त गर्न तपाईं कहाँ जाँदैछन्. प्रदर्शन सही उत्तेजित गर्दछ वा आवेगशील -मीटर पाना मा को गलत पक्ष सडक बनाउन क्रम मा एक छिटो बायाँ बारी । दुवै कार्यहरू हुन्छन् पाठ्यक्रम कुरा रूपमा. यसबाहेक, यो असामान्य छैन सामना गर्न कसैले समर्थन मा माथि फ्रीवे पछि भएको सम्झना एक बारी-बन्द छ । वा बसें उठयो एक भाडा छन् लिन दुई लेन क्रममा गुमाउने जोगिन आफ्नो ठाउँ मा सडक, र छन् विशाल नीलो रूसी-निर्माण ट्रक बैरल तल राजमार्ग संग अनुभवहीन चालक कर्ण मा. हेडलाइट्स प्रयोग गरिन्छ (पनि शहर बसें) मात्र गर्दा बिल्कुल आवश्यक छ, र राती धेरै चालक छोड्न आफ्नो उज्ज्वल मा, नदेखिनेसेतो तपाईं र छोडेर आफूलाई मुक्त को भटकना मा आफ्नो बाटो । दर्पण र बारी सूचक हुन लाग्न कस्मेटिक को मन मा, चिनियाँ र मर्ज यातायात अक्सर रूपमा उल्लेख छ"कछुवा हिंड्न किनभने"सबैभन्दा चालक जस्तो महसुस भने तिनीहरूले बाहिर पुल मा तपाईं को सामने ढिलो पर्याप्त समायोजन गर्न समय आफ्नो गति । यातायात संकेत हो पालन गर्दा सुविधाजनक र असफल बिना, कसैले सधैं चलान रातो प्रकाश - विशेष गरी साँचो मा बेइजिङ । यो बन्द शीर्ष, चालक काम आहत भने अरू सबैलाई आदर गर्दैन भन्ने तथ्य तिनीहरूले एक कार छ । भएको एक कार मा चीन बनाउँछ तपाईं द्वारा परिभाषा त्यसैले, आदर लागि आफ्नो स्थिति को उच्चतम महत्व र पदयात्रीहरुलाई, र सबै अरूलाई पर्छ. यो हुनुको जस्तै छ फिर्ता मा खेल मैदान मा."म बनाउँछ भन्ने मलाई राजा रोड ।"मूलतः, तपाईं एक पटक बाहिर कदम को आफ्नो घर छ, सानो वा कुनै सुरक्षा त्यहाँ बाहिर छन् र तपाईं बेशक. सडक नियम जस्तै, पुलिस जो लागू, तिनीहरूलाई कडाई मामला-मा-बिन्दु परिदृश्यहरु । चिनियाँ पुलिस त हो दयाशील नियम यो बनाउन हुनेछ एक ला होस । सम्झना, भने यो हुन सक्छ, यो हुनेछ, र यो छ सबै भन्दा राम्रो गर्न मन राख्न पुरानो मजाक,"जहाँ गर्छ -पाउन्ड बस्न ।"जवाफ:"कहीं उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ."कानून को जंगल मा लागू यस्तो स्पष्ट तरिकामा यो याद छैन असम्भव छ. समग्र अनुभूति खतरा र विपत्ति कुनै पनि निर्देशन देखि कुनै पनि समय मा कहिल्यै-वर्तमान छ. विपरीत फिलिपिन्स, मेरो पूर्व घर र ठाउँ जहाँ सडक कौशल हुन गर्छन यज्ञ प्रकृति मा टेम्पर्ड को एक महान सम्झौता संग, चिनियाँ आलिंगन अधिक को एक साइकल मात्र उच्च गति मा घेरिएको छ, एक मोटी छाला को स्टील. म के ड्राइव यहाँ, तर म मात्र हाल प्राप्त एक चिनियाँ चालक अनुमतिपत्र छ । पहिले म बस बिना खेद्नुभयो, एक धेरै जस्तै अन्य विदेशीहरू. लिएर ड्राइभर गरेको परीक्षा आवश्यक सेवा को एक व्यक्ति थिए जो एक नाम कार्ड तर कुनै व्यापार ठेगाना । उहाँले र आफ्नो सहयोगिहरु माथि लहरै बरु व्यापक कागजी लागि मलाई योग्य बस परीक्षण लिन छ । यी समावेश मेडिकल टेस्ट, एक काम परमिट, प्रहरी निवास दर्ता, र एक स्थायी निवासी कार्ड । जो पछि म दिइएको थियो परीक्षण पुस्तक संग एक हजार प्रश्न । तिनीहरूले एक प्रतिलिपि मा, अंग्रेजी र सय प्रश्न छानिएका छन् अनियमित समावेश गर्न मा परीक्षण छ । अधिकांश प्रश्न हुन लाग्न लागि दण्डात्मक उपाय रूपमा,"के अधिकारीहरूले गर्न सक्छन् तपाईं."त्यहाँ पनि धेरै प्रश्नहरूको स्पष्ट डिजाइन लागि मात्र नयाँ चालक, तर ओटो उद्योग नै छ । तल केही वास्तविक उदाहरण लिइएका परीक्षण छ: तपाईं के छ भने एउटा दुर्घटना र कसैलाई गरेको बाहिर झुन्डिएको छन् आफ्नो शरीर । ड्राइभिङ गर्दा एक गर्मी रात, एक हुँदैन मा खाता को फाइदा उठाएर, सुन्दर रात हावा । परीक्षण मा लिया छ एक कम्प्युटर र जस्तै देखिन्थ्यो यस्तो गम्भीर व्यापार सम्म प्यारा सानो खुसी अनुहार आए अप स्क्रीन मा र मलाई दिनुभयो एक अर्थ, म पारित गरेको छ । जुनसुकै को सबै नियम र परीक्षण गर्न आवश्यक ड्राइव, म कहिल्यै देखेका छन् जो कोहि पालना. कम से कम छैन बेइजिङ मा रूपमा, यो कुल जंगल-बल बाहिर त्यहाँ र देखा थियो यो सरकार बावजुद, यसको सबै भन्दा राम्रो मनसाय छ, असाध्यै सीमित गरेर आफ्नो क्षमता लागू गर्न. मेरो पत्नी, चिनियाँ छ जो, हालै प्राप्त उनको चालक अनुमतिपत्र शेन्जेन मा उनको अनुसार, (र म बिल्कुल कुनै कारण पक्कै उनको), त्यो थियो जब ड्राइव गर्न सिक्दै धेरै मानिसहरू बस बन्द भुक्तानी ड्राइभिङ प्रशिक्षक र एक स्वतन्त्र पास मिल्यो छ । यसैले धेरै रूपमा तीस प्रतिशत वा बढी चालक को सडक मा हुन सक्छ लाइसेन्स तर कौशल छ । यो सकारात्मक छ भन्ने प्रमाण छ भने तपाईं प्राप्त गर्न सक्दैन, एक चालक अनुमतिपत्र मा"सामान्य"बाटो, त तपाईं के गर्न सक्छन् यो"अन्य सामान्य तरिका"छ । म छु कि निष्कर्षमा पुगे भने तपाईं कहिल्यै गति वा चुनौती केहि वा जो कोहि त्यसपछि तपाईं सबै सही. यो क्षण म आवश्यकता महसुस प्रतियोगिता अर्को चालक, वा पैदल गरेको उद्देश्य छ क्षण म असफल । कुनै विजेता को सडक विवाद विदेशीहरू लागि. पनि भने म गर्ने थिए र स्पस्ट बोल्नु् भाषा पाउन कुनै मित्र कहीं वास्तवमा टक्कर कसैले गरेको कार वा ट्याप, एक पैदल, कि तिनीहरूले जाँदैछन् गलत बाटो तल एक-तरिका सडक वा पार संग कुनै पार खण्ड मा, दृष्टि बनाउँछ तपाईं खराब मान्छे. रोकिँदै वास्तवमा प्रस्तुत सहायता वा अत्याचार गरेर आफ्नो अज्ञानता र त्रुटि सामान्यतया दिन्छ पर्याप्त समय को लागि एक भीड विकास गर्न - एक परिदृश्य कि अनिश्चिततरिकालेहोल्डगर्नुहोस् समाप्त नराम्ररी. लेखक बारे: स्मिथ एक गर्ने बारे लेख्छन् काम चीन मा पछिल्लो दस वर्ष को लागि. आफ्नो पुस्तक"को दुःखद् राज्य, वा कैदी मा एक चिनियाँ विषय पार्क"प्रोफाइल को व्यक्तित्व, संस्कृति, र मनोविज्ञान को संसारको सबैभन्दा विशाल सक्ने महाशक्ति आँखा माध्यम देखेको रूपमा एक पूर्व-पेट अमेरिकी छ । एक अवार्ड विजेता बीमा व्यवसाय प्रदान स्वास्थ्य लाभ भन्दा बढी, सदस्य. आफ्नो उच्च गुणवत्ता स्वास्थ्य बीमा योजना गर्न अनुकूल को व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा जीवित र विदेश काम गर्न । विश्व अन्तर्राष्ट्रिय निजी मेडिकल बीमा प्रदान गर्दछ गर्न प्रत्यक्ष पहुँच को केही धेरै राम्रो डाक्टर र अस्पताल. छान्नुभएको छ जो व्यक्तिहरूलाई मूल्य विशेषज्ञता, स्वतन्त्रता र गुणवत्ता छ. तपाईं गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न आफ्नो मनपरेको डाक्टर नजिक घर वा मा एक विशेषज्ञ अर्को देश हो । आफ्नो स्वास्थ्य बीमा योजना को लागि डिजाइन गर्दै छन् दिन-देखि-दिन स्वास्थ्य आवश्यक पनि छ ।.
उत्पादन दायित्व वकिल, कानून कम्पनीहरु को लागि चीन मा हरेक शहर
व्यवस्था कार्यालय बेन्जामिन लुओ छ व्यापार को नाम श्री लुओ गरेको अभ्यास कानूनी नाम को आफ्नो व्यवस्था दृढ छ भनिन्छ संघाई व्यवस्था दृढ छ । संघाई स्थित, चीन मा, दृढ को एक सीमा प्रदान गर्दछ कानूनी सेवा गर्न घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकहरु को क्षेत्र मा व्यापार कर्पोरेट व्यापारिक छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन निःशुल्क परामर्श शुल्क वकिल एक बुटीक व्यवस्था दृढ एक प्रदान-स्टेशन क्रस-सीमाना कानूनी सेवा मा हङकङ नियमहरू र पीआरसी व्यवस्था
व्यवस्था दृढ छ, दुई कार्यालय - एक हङकङ अभ्यास हङकङ नियमहरू र अन्य शेन्जेन, चीन मा अभ्यास पीआरसी व्यवस्था.
व्यवस्था दृढ मुख्यतः प्रचलन मा छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन एक पूर्ण-सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था दृढ संग, यसको मुख्यालय मा स्थित बेइजिङ । स्थापित मा, व्यवस्था दृढ छ, पहिले नै एक स्थापित प्रतिष्ठा मा चिनियाँ कानूनी सेवाहरू बजार । संग अधिक वकिल, अब हामी सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक व्यवस्था कम्पनीहरु मा एशिया र । अन्य कार्यालय: गुआंगजौ, टियांजिन व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन लेख निःशुल्क कार्ड पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय मा स्थापित भएको थियो. हामी विशेषज्ञ व्यापारिक व्यवस्था, लगानी योजना, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, र चीन मामिलामा सम्बन्धित मुद्दाहरू । कारण सक्रिय अर्थव्यवस्था बीच बातचीत, ताइवान, हङकङ र मुख्य भूमि छ । अन्य कार्यालय: हङकङ व्यवस्था कडा गरेको अवलोकन चीन व्यवस्था सेवा (वुहान) सीमित छ एक प्रतिष्ठित व्यवस्था कडा लाइसेन्स प्रदान गर्न कानुनी र परामर्श सेवा मा चीन छ । हाम्रो कानूनी टीम छ, एक मा-गहिराई बुझ्न र ज्ञान को क्षेत्रीय कानूनी संस्कृति र बजार गतिशीलता । अधिक संग बीस वर्ष को अभ्यास व्यवस्था मा चीन, हाम्रो । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन निःशुल्क परामर्श शुल्क एंजेला वांग सह. हामी प्रदान अचल कानूनी क्षमताहरु को लागि व्यापार मा एक स्वीकार्य लागत । हाम्रो टीम वकिल रचनात्मक र व्यावहारिक समाधान गर्न अक्सर जटिल मुद्दाहरू । हामी ले निर्देशन देखि घरेलू । अन्य कार्यालय: संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन लेख पावलले. चान साझेदार मा स्थित हङकङ, चीन र को एक किसिम प्रदान कानूनी सेवा प्रमुख क्षेत्रमा अभ्यास समावेश निर्माण र व्यापारिक विवाद, कर्पोरेट र व्यापारिक व्यवस्था, बौद्धिक गुण, कर्पोरेट वित्त र जमानत, अध्यागमन, सम्पत्ति छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन संघाई चीन सबैभन्दा ठूलो शहर र केन्द्र वाणिज्य र वित्त । आर्मस्ट्रांग मा भएको छ देखि चीन. व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन मैकडरमोट हुनेछ छ रणनीतिक संग पङ्क्तिबद्ध चीन व्यवस्था कार्यालय पूर्ण सीमा प्रदान गर्न, कानूनी सेवा र व्यवसाय सल्लाह गर्न चिनियाँ कम्पनीहरु र बहुराष्ट्रिय निगम चीन मा व्यापार गरिरहेका छन् । देखि संघाई कार्यालय, चीन व्यवस्था प्रस्ताव विविध क्षेत्रको अनुभव छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन लगातार रूपमा मान्यता मा एक नेता, क्षेत्र, बेकर गरिरहेको छ व्यापार मा लागि हङकङ लगभग चालीस वर्ष. को एक अभिन्न भाग दृढ गरेको प्रख्यात चीन अभ्यास, हाम्रो टीम अधिक भन्दा तीन सय वकिल छ गहिरो स्थानीय जरा र एकीकृत वैश्विक पुग्न मदत गर्न घरेलू । अन्य कार्यालय: बेइजिङ, संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन कर्टिस खोलिएको यसको बेइजिङ कार्यालय प्रारम्भिक मा प्रदान गर्न कानूनी सेवा गर्न ग्राहकहरु सञ्चालन वा मा स्थित चीन र पूर्व एशिया । को बेइजिङ कार्यालय निर्देशाङ्क संग राम्ररी दृढ अन्य कार्यालय मा संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, ल्याटिन अमेरिका, मध्य पूर्व र मध्य.
व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन कार्यालय प्रस्ताव को पूर्ण सीमा गर्न कानूनी सेवा प्रविधि कम्पनीहरु र निजी लगानी कम्पनीहरु । देखि जटिल बौद्धिक सम्पत्ति मामिलामा सम्बन्धित पेटेंट, कपीराइट, ट्रेडमार्क र व्यापार गोप्य विवाद लागि सफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्प्युटर, इलेक्ट्रनिक्स, मनोरञ्जन । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन वकिल हङकङ प्रदान परिणाम-उन्मुख, कानूनी र व्यापार समाधान गर्न निगम र धन लगानी मा चीन र चिनियाँ संस्थाहरुको रणनीतिक योजना बाहिरी लगानी छ । ग्राहकहरु भर हाम्रो गहिरो समझ को स्थानीय व्यापार र नियामक प्रचलन मा चीन छ । अन्य कार्यालय: बेइजिङ व्यवस्था कडा गरेको अवलोकन एक नेता बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानून कम्पनीहरु प्रदान, व्यापार व्यवस्था सल्लाह उच्चतम गुणवत्ता को भर युरोप, मध्य पूर्व, एशिया र अमेरिका, पाँच सय वकिल मा बीस-सात प्रमुख व्यापार केन्द्र को एक दुनिया भर, हामी प्रदान एक व्यापक छ । अन्य कार्यालय: हङकङ, संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन सिम्पसन प्रदान समन्वित कानूनी सल्लाह र प्रतिनिधित्व केही मा सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा जटिल र मुद्दा मामिलामा.
हाम्रो मुख्यालय कार्यालय न्यूयोर्क शहर मा काम कार्यालय मा बेइजिङ, हङकङ, लन्डन, लस.
अन्य कार्यालय: हङकङ व्यवस्था कडा गरेको अवलोकन आफ्नो प्रतिष्ठा को चरित्र, निष्ठा, क्षमता, र आत्मा को आफ्नो वकिल र कर्मचारी संग शुरू, संस्थापकों, र, र जारी गर्न यो दिन । हाम्रो विशेषज्ञता मा सार्वजनिक वित्त र कर्पोरेट व्यवस्था पलाउँछ बीजीय. अन्य कार्यालय: हङकङ, संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन मा स्थापित, छ अहिले भन्दा बढी वकिल संग दुई कार्यालय पेरिस र हङकङ । वकिल' विशेषज्ञ ज्ञान को एक नम्बर को विशेषज्ञ क्षेत्रमा गर्न तिनीहरूलाई सक्षम ठेगाना को पूर्ण सीमा को आफ्नो ग्राहकहरु' आवश्यकताहरु. गरेको मुख्य क्षेत्रहरु गतिविधिहरु को छन् सम्पत्ति व्यवस्था छ । अन्य कार्यालय: गुआंगजौ, संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन छ एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दृढ परामर्श कम्पनीहरु, वित्तीय संस्थाहरूको र सरकारको छ । हाम्रो कोर कारोबार मा कर्पोरेट, वित्त, विवाद संकल्प र विकास, र वित्तीय सम्पत्ति को मा ऊर्जा, स्रोत र पूर्वाधार क्षेत्र । अन्य कार्यालय: संघाई व्यवस्था दृढ गरेको समिक्षा हुनुको साथै रूपमा मान्यता छ, एक बजार नेता मा एशिया प्यासिफिक, सबै भन्दा ठूलो कानूनी संसारमा समूह र एक प्रमुख सल्लाहकार प्रमुख र भाग्य पाँच सय कम्पनीहरु, आफ्नो मान्छे भएको अलग मान्यता बीच संसारको पूर्व-महत वकिल छ । आफ्नो सफलता । अन्य कार्यालय: संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन एक प्रिमियम पूर्ण-सेवा अन्तर्राष्ट्रिय कानून दृढ छ । ग्राहकहरु लाभ उठाउन हाम्रो एकीकृत प्रचलन र हाम्रो प्रतिबद्धता गुणवत्ता संग संयुक्त एक अद्वितीय व्यापारिक जानकारी छ । हामी संग काम स्थानीय व्यवस्था कम्पनीहरु, विदेश भेटी हाम्रो ग्राहकहरु को शीर्ष समाधान गर्न जटिल अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा । मा. व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन सैंडर्स छ अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था दृढ संग अधिक वकिल र सोह्र कार्यालय मा उत्तर अमेरिका, युरोप र एशिया. स्थापित मा, दृढ सम्पदाको को व्यापक अनुभव छ, असाधारण प्रतिक्रिया र एक अटूट प्रतिबद्धता सेवा, लामो-खडा छ । अन्य कार्यालय: संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन छ मोन्ट्रियल कर्पोरेट, व्यापारिक र व्यापार व्यवस्था दृढ छ । क्षमता छ सहयोग गर्न ग्राहकहरु कहीं दुनिया मा. हामी एक लामो इतिहास अभिनय को लागि विदेशी देख कम्पनीहरु सेट अप गर्न क्यानाडा को बजार मा. व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन मा ईख स्मिथ हामी साँच्चै विश्वास छ कि, 'यो व्यापार छ । यो व्यक्तिगत छ । हामी एक शीर्ष वैश्विक व्यवस्था कडा छ कि काम मा घनिष्ठ साझेदारी संग आफ्नो ग्राहकहरु भर एक सफल वर्षको इतिहास बढ्न देखि हुनुको एक प्रमुख राष्ट्रिय व्यवस्था दृढ एक व्यवस्था दृढ छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन सिमंस सिमंस छ अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था दृढ मा केन्द्रित चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । हाम्रो कार्यालय मा प्रमुख व्यापार र वित्तीय केन्द्र भर युरोप, मध्य पूर्व र एशिया, हामी संसारको हेर्नुहोस् को चश्मा माध्यम चार महत्वपूर्ण उद्योग: ऊर्जा र पूर्वाधार, वित्तीय । अन्य कार्यालय: संघाई व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन एल्किन्स. छ एक वैश्विक व्यवस्था कडा अभ्यास को लगभग सबै क्षेत्रमा नागरिक कानून र केही क्षेत्रमा सेतो कलर आपराधिक व्यवस्था छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन.
चीन प्रोक्सी सर्भर सूची - चिनियाँ
प्रोक्सी सर्भर सूची - यो पृष्ठ प्रदान गर्दछ र राख्छ सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा माथि-देखि-मिति सूची को काम प्रोक्सी सर्भर लागि उपलब्ध छन् कि सार्वजनिक प्रयोगहाम्रो शक्तिशाली सफ्टवेयर जाँच एक लाख भन्दा बढी प्रोक्सी सर्भर दैनिक, संग सबैभन्दा परीक्षण कम्तिमा एक पटक हरेक पन्ध्र मिनेट, यसरी सिर्जना सबैभन्दा विश्वसनीय प्रोक्सी सूची मा इन्टरनेट. कुनै पनि प्रोक्सी सर्भर मा सूचीबद्ध यो पृष्ठ प्रयोग गर्न सकिन्छ संग, एक सफ्टवेयर आवेदन छ कि को प्रयोग समर्थन यस्तो रूपमा आफ्नो वेब ब्राउजर. सबैभन्दा लोकप्रिय प्रयोगहरू को समावेश लुक्ने आफ्नो वास्तविक आईपी ठेगाना, आफ्नो भौगोलिक स्थान, र पहुँच अवरुद्ध वेबसाइटहरु. सूची हुन सक्छ फिल्टर तल को एक नम्बर द्वारा यस्तो पोर्ट नम्बर एक प्रोक्सी, देश को मूल को एक प्रोक्सी, र स्तर को गुमनाम को एक प्रोक्सी. एक अधिक विस्तृत व्याख्या बारे विशेष मा पाउन सकिन्छ हाम्रो प्रोक्सी स्तर बताउनुभयो पृष्ठ, तर आधारभूत व्यवहार को प्रत्येक प्रोक्सी स्तर यस जस्तै जान्छ: लगभग कुनै पनि आवेदन छ, यस्तो आफ्नो आफ्नै वेब-ब्राउजर, गर्न कन्फिगर गर्न सकिन्छ मार्ग आफ्नो कनेक्शन माध्यम एक प्रोक्सी सर्भर को कारण गुमनाम वा प्रदर्शन । आफ्नो ब्राउजर एक प्रोक्सी सर्भर प्रयोग गर्न छिटो र सजिलो छ, र यो लागि निर्देशन गरिरहेका छन् भनेर वर्णन गर्न हाम्रो लेख खण्ड । तथापि, सिफारिश गर्न वैकल्पिक गरिरहेको ती सबै कदम कुनै पनि समय तपाईं इच्छा प्रयोग गर्न विभिन्न प्रोक्सी, प्रयोग गर्न छ हाम्रो घर प्रोक्सी स्विचर गर्न सक्छन् भन्ने सरल बनाउन सारा प्रक्रिया बस केही माउस क्लिक. हाम्रो प्रोक्सी स्विचर बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ हाम्रो प्रोक्सी सफ्टवेयर.
चीनको प्रगति मा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (हो, साँच्चै) - कूटनीतिज्ञ
चीन लामो छ देख्न, यो"संसारको कारखाना,"बाहिर कम-गुणवत्ता निर्मित सामान र अनुकरण उत्पादनहरु र व्यापार मोडेल देखि विदेश । कि यो छ, कारण भारी-हस्तान्तरण सरकारले हस्तक्षेप वा केही सांस्कृतिक तर्क बारेमा शैक्षिक मान, चीन या त कथा जान्छ को एक देशमा छ असक्षम को नवीनता संग कुनै आदर लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (बौद्धिक संपदा)अझै धेरै अमेरिकी कम्पनीहरु अझै पनि विश्वास छ, यो कथा । एक अनुसार द्वारा आयोजित सर्वेक्षण मा वाणिज्य अमेरिकी चीन, सदस्य कारोबार विभाजन मा आफ्नो दृश्य को चीनको बौद्धिक संपदा नियमहरू र नियमहरु तथापि, भन्दा बढी को उत्तरदाताओं को आधा रहन हद सन्देह गर्ने कि कानून सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति हुनेछ ठीक लागू गर्न चीन मा छ । विदेशी कम्पनीहरु लामो भन्ने गुनासो प्रचलनमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार मा चीन गाह्रो छ कारण स्थानीय न्यायिक, चुनौतीहरूको मा प्राप्त प्रमाण, सानो क्षति पुरस्कार, र एक कथित पूर्वाग्रह विरुद्ध विदेशी कम्पनीहरु । तर, विगतमा दशक भन्दा, चीन झन् अभिनव र प्रदर्शन छ, एक गम्भीर समाधान लागू गर्न प्रभावकारी बौद्धिक संपदा शासन । वास्तवमा, चिनियाँ कम्पनीहरु मा ध्यान वैश्विक विस्तार विदेश र उच्च-प्रविधी नवीनता घर मा, तिनीहरूले झन् माग प्रभावकारी आईपी सुरक्षा देखि सरकार । वास्तवमा, धेरै को चिन्ता खडा गरेर विदेशी कम्पनीहरु चीन सञ्चालन गरिएको छ सम्बोधन गरेर कानूनी सुधार र नयाँ प्रवर्तन तंत्र । एक प्रमुख गुनासो लगाइन्छ विरुद्ध चीनको बौद्धिक संपदा शासन छ भन्ने अवस्थामा ल्याए एउटा मध्यवर्ती कोर्ट (मा नगर स्तर) हुनेछ ग्रस्त स्थानीय न्यायिक. लामो र वांग पाइएन मा आफ्नो अध्ययन मा आईपी अवस्थामा बीच चिनियाँ कम्पनीहरु, मा आफ्नो गृहनगर हो एकदम अधिक जीत संभावना छ । तथापि, तिनीहरूले पनि फेला कि जब अवस्थामा छन् अपिल गर्न उच्च न्यायालय (मा प्रान्तीय स्तर), वादी स्थान अब एक महत्वपूर्ण प्रभाव मामला मा नतिजा. रूपमा सारांशित मा एक सेतो कागज देखि सर्वोच्च जनता कोर्ट, चीन लिएको छ महत्त्वपूर्ण कदम हटाउन स्थानीय न्यायिक र सुनिश्चित को एक निष्पक्ष प्रक्रिया मा आईपी अवस्थामा छ । अक्टोबर मा, सर्वोच्च जनता कोर्ट स्थापित आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति विभाजन निरीक्षण गर्न राष्ट्रिय अवस्थामा छ । मा, बेइजिङ, संघाई र गुआंगजौ सेट अप आफ्नै बौद्धिक सम्पत्ति कोर्ट छ । प्रारम्भिक, नानजिंग, सूजौ, चेंगदू, र वुहान शुरू विशेष बौद्धिक सम्पत्ति अधिकरणों. किनभने यी कोर्ट पहिलो उदाहरणका अधिकार क्षेत्र भन्दा सबै आईपी अवस्थामा मा आफ्नो सम्बन्धित प्रान्त, छैन मात्र नकारात्मक प्रभाव स्थानीय मा एक अधिक क्रमबद्घ बाटो हटाएर अवस्थामा स्थानीय अधिकार क्षेत्र, तर कोर्ट पनि गर्न सक्षम हुनेछ राम्रो प्रदान न्यायाधीशहरु र प्राविधिक जांचकर्ताओं संग आवश्यक विशेषज्ञता सामना गर्न को जटिल प्रकृतिको आफ्नो. यो हुनेछ भनेर सुनिश्चित र घरेलू र विदेशी दुवै निष्पक्ष उपचार प्राप्त छ । क्रम मा गर्न प्रभावकारी मुद्दा दिनु बौद्धिक सम्पत्ति अवस्थामा, आईपी धारकों आवश्यक प्रमाण । संयुक्त राज्य अमेरिका मा, दल सामान्यतया माध्यम जानकारी प्राप्त पूर्व-परीक्षण प्रक्रिया को खोज समावेश जो, र, साथै अनुरोध को लागि प्रवेश र पहुँच कागजातहरू, अचल सम्पत्ति, वा अन्य प्रासंगिक आइटम लागि समीक्षा वा परीक्षण । चीन मा, अर्कोतर्फ, कुनै औपचारिक प्रक्रिया को खोज अवस्थित, र त्यहाँ छ कुनै आवश्यकता छ कि आईपी प्रमाण प्रदान, यस्तो बिक्री रूपमा वा लेखा कागजातहरू, गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन उल्लङ्घन । वास्तवमा, यो बोझ प्रमाण प्रदान गर्न छ मा वादी. धेरै कम्पनीहरु दाबी गरेका छन् कि यो बनाउँछ यो असम्भव सञ्चालन गर्न उचित आईपी मुद्दा मा चीन छ । चाखलाग्दो कुरा, लेख साठी-पाँच चीनको नागरिक प्रक्रिया व्यवस्था,"हुनेछ र मानिसहरूको अदालत को अधिकार प्रमाण प्राप्त गर्न प्रासंगिक एकाइहरु वा व्यक्तिहरूलाई, र यस्तो एकाइहरु वा व्यक्तिहरूलाई सक्छ इन्कार गर्न प्रमाण प्रदान."क्षमता अदालतको आदेश रेकर्ड थियो को कमी को एक औपचारिक खोज प्रक्रिया छ, तर हालै सम्म, यो भएको छैन व्यापक बोलाइएको छ । मा, तथापि, सर्वोच्च जनता कोर्ट एक नयाँ अर्थ को नागरिक प्रक्रिया व्यवस्था अनुसार, जो लेखमा को अर्थ दिन्छ एक पार्टी भनेर अनुरोध गर्न अदालतले आदेश को विरोध पार्टी उत्पादन गर्न विशिष्ट वृत्तचित्र प्रमाण अन्तर्गत छ कि अन्य पार्टी गरेको नियन्त्रण । यो व्याख्या हुनेछ"प्रोत्साहन अनुरोध को उत्पादन को लागि खाता, रेकर्ड, र पुस्तकहरू रूपमा, न्यायाधीशहरूले भएको थिए कठिनाई संग ठीक आकलन हर्जाना"र सिर्जना एक निष्पक्ष प्रक्रिया लागि खरीद जानकारी । यी नयाँ व्याख्याहरु को प्रमाण पनि मदत गर्नेछ संग समस्या को क्षति पुरस्कार । धेरै कारोबार गुनासो गरेका छन् कि लाग्दा बौद्धिक सम्पत्ति अवस्थामा चिनियाँ अदालतमा सार्थक छैन किनभने यो हर्जाना सम्मानित पनि सानो हो । केही अनुमान संकेत भनेर स्पष्ट धारकों हाल प्राप्त वरिपरि तीस-छवटा प्रतिशत हर्जाना तिनीहरूले खोज्न मुद्दा संग, क्षति पुरस्कार वरिपरि बस, (डलर) र कानूनी शुल्क बीच, र, (डलर, गर्न डलर).
तर, पछिल्लो जुलाई मा राष्ट्रिय वित्तीय काम सम्मेलन, राष्ट्रपति क्सी घोषणा कि चीन पर्छ"प्रयास अप कदम दण्ड अवैध उल्लङ्घन को बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र शक्ति एक भारी मूल्य तिर्न."यो प्रतिबिम्बित छ एक प्रस्तावित नीति परिवर्तन को चौथो प्याटेन्ट व्यवस्था संशोधन छ, जो समीक्षा अन्तर्गत अझै छ । वैधानिक हर्जाना वृद्धि हुनेछ देखि आफ्नो वर्तमान स्तर बीच, एक लाख (डलर, गर्न डलर), गर्न बीच, र पाँच लाख (डलर, डलर.
संग लाइन मा यो नीति उद्देश्य देखि चीन गरेको शीर्ष नेतृत्व, अदालतमा पनि गरे वृद्धि गर्न प्रयास हर्जाना बौद्धिक सम्पत्ति जोगाउन आफ्नो शास्त्र छ । मा, बेइजिङ आईपी अदालत फेला पक्षमा वादी सिस्टम कं, लिमिटेड र प्रतिवादी आदेश सह, लिमिटेड तिर्न चालीस-नौ लाख हर्जाना लागि एक प्याटेन्ट उल्लङ्घन प्लस एक अतिरिक्त एक लाख मा कानूनी शुल्क (को कुल को लागि डलर. दुई लाख) । यस्तै ऐतिहासिक मा आईपी सुरक्षा समावेश, एक ट्रेडमार्क उल्लङ्घन सत्तारूढ भनेर आदेश तीन चिनियाँ तिर्न नयाँ सन्तुलन दस लाख (डलर. पाँच लाख) को लागि प्रतिलिपि नयाँ शेष गरेको लोगो र एक प्रतिलिपि उल्लङ्घन सत्तारूढ भनेर आदेश प्रविधि भन्दा तिर्न छ लाख (डलर) लागि अवैध स्ट्रिमिन्ग छ एपिसोड को आवाज चीन को. यी अवस्थामा सबै पालन मा एक सामान्य प्रवृत्ति वृद्धि क्षति पुरस्कार मा आईपी मुद्दा छ । वास्तवमा, औसत हर्जाना सम्मानित लागि प्याटेन्ट उल्लङ्घन को बेइजिङ आईपी अदालत बढेको छ अधिक भन्दा तीन गुना देखि, (डलर) मा. ट्रेडमार्क उल्लङ्घन अवस्थामा अब हेर्न औसत हर्जाना वरिपरि. सात लाख (डलर) र अवस्थामा देख्न पुरस्कार भनेर औसत, (डलर) अन्तमा, एक स्ट्रिङ को उच्च-प्रोफाइल घाटा गर्न अपेक्षाकृत अज्ञात मा चिनियाँ कम्पनीहरु प्याटेन्ट उल्लङ्घन अवस्थामा जस्तै कम्पनीहरु द्वारा एप्पल, सैमसंग, सोनी, र डेल विश्वस्त छन् धेरै दर्शकहरूलाई कि यो असम्भव छ लागि विदेशी कम्पनीहरु प्राप्त गर्न एक निष्पक्ष शेक मा चीनको. तैपनि, यी तैयार अवस्थामा गर्छन गल्ती को शानदार लागि व्यवस्थित । वास्तविकता मा, विदेशी कम्पनीहरु भाडा बस रूपमा राम्रो मा लागू आईपी अधिकार मा परीक्षण रूपमा निजी-स्वामित्व चिनियाँ कम्पनीहरु । एक अध्ययन गरेर प्रेम, र भेट्टाए बीच र, विदेशी कम्पनीहरु ल्याएको भन्दा दस प्रतिशत को प्याटेन्ट उल्लङ्घन अवस्थामा चीन र जिते सत्तरी प्रतिशत ती अवस्थामा छ । आज, जीत दर औसत वरिपरि प्रतिशत र निषेधाज्ञा दर औसत वरिपरि प्रतिशत छ । यी संख्या संग, यो कुनै आश्चर्य छ कि चीन झन् रूपमा चयन मंच को विकल्प को लागि गैर-चिनियाँ कम्पनीहरु मुद्दा दिनु गर्न आईपी विवाद छ । को मामला मा, नीति बस गत महिना, चीन समाप्त भएको चार महिना राष्ट्रव्यापी अभियान समन्वित भर बाह्र सरकार एजेंसियों रक्षा गर्न आईपी अधिकार को विदेशी कम्पनीहरु । आशा छ कि यो अभियान सुधार हुनेछ बीचमा सहयोग आईपी प्रवर्तन शरीर बनाउन, एक ध्वनि वातावरण लागि, विदेशी लगानीकर्ताले र रोकते भविष्य को उल्लंघन विदेशी आईपी. जबकि केही तर्क गरेका छन् कि घरेलू राजनीतिक अवरोध रोक्न चीन बनाउने महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन, चीन पहिले नै मा उपक्रम को कठिन कार्य को यसको बौद्धिक संपदा शासन । वास्तवमा, घरेलू मांग गरेको छ, यो आवश्यक छ । मात्र छ चीन सुधारिएको यसको आईपी नियमहरू विस्तार गर्न स्वीकार गर्न सकिने प्रमाण र वृद्धि हर्जाना लागि उल्लंघन, तर यो पनि सुधारिएको यसको कानुनी संरचना र कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति सीमा को संभावना र पूर्वाग्रह विरुद्ध विदेशी.
जबकि सिस्टम मा सम्म सिद्ध छ, प्रभाव यी सुधार हुँदैन अनि कम चर्चा गरिएकामा । यी परिवर्तनहरू प्रतिनिधित्व एक सकारात्मक प्रवृत्ति मा चीनको व्यापारिक वातावरण रूपमा र नियमहरू जगाउन गर्न जारी घरेलू नवीनता, विदेशी कम्पनीहरु बेवास्ता यस प्रगति मा आफ्नै जोखिम छ । विलियम छ - फुलब्राइट सँगी आधारित चेंगदू मा, चीन, जहाँ उहाँले अनुसन्धान बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्था, आईपी प्रवर्तन, र प्रविधिको नवीनता नीति छ । आनन्द पूर्ण पहुँच र वेबसाइट एक स्वचालित सदस्यता गर्न हाम्रो पत्रिका संग एक कूटनीतिज्ञ सबै-पहुँच सदस्यता.
अनुवाद: झाओ देश र दिवालियापन को देशभक्ति - चीन डिजिटल पटक
एक प्रकाशित अधिक वर्ष पहिले सामाजिक क्षय हुनु को लेट इम्पेरियल चीन छ फेला लागि नयाँ अर्थमा लू गरेको"साँचो कथा को आह क्यू,"विरोधी-नायक खोज्छ गर्न सहयोगी संग आफूलाई जवान मास्टर झाओ, मात्र धक्का गर्न दूर । लाइन"के तपाईं लाग्छ तपाईं छौं नाम को योग्य झाओ."अब लागू गर्न स्वयंसेवक पचास केन्द्र, लेख्न मानिसहरूलाई समर्थक-सरकार अनलाइन टिप्पणी. अनलाइन को चर्चा"झाओ परिवार"भए एक शक्तिशाली आलोचना राजनीतिक र आर्थिक शक्ति छ । मो बताउँछन् चीन मा परिवर्तन, कोहो"प्रत्यक्ष सन्तानले को पुस्ता को चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी नेताहरूले स्थापित गर्ने कम्युनिस्ट."ब्लगर कसरी बताउँछन् देख चीन"रूपमा झाओ देश"मा प्रकाश शेड साँचो प्रकृति को शक्ति, र प्रदान गर्न एक तरिका को यथास्थिति परिवर्तन गर्न । एक देश रूपमा शक्तिशाली अधिकारीहरु, यो एक वास्तवमा छ कि चीन अभ्यास छ पूंजीवाद । नाम"आकाशीय साम्राज्य"प्रतिस्थापन"चीन ।"रूपमा सेवा गर्दैछन् भन्ने एक हुनुपर्छ सधैं नजिक आउन को सार छ । हाल, त्यहाँ पनि भएको अभिव्यक्ति"आफ्नो देश,"जो को प्रकारको छ भनेर साँध सीमाङ्कन बिस्तारै सिर्जना दूरी छ । छोटो मा, बदबूदार मजाक मान्छे संग नहुनु मा यो देशको पहिचान कुनै कुरा, तपाईं यो कल, नयाँ चीन को गणतन्त्र, हाम्रो देश, या मातृभूमि. लाभ को बाहिर भुक्तानी को मृत्यु पछि किसान प्रदर्शन कसरी कठिन, निराशाजनक, हिंसात्मक, र यो महंगा हुन सक्छ, को लागि एक देशकोगर्न माग यसको अधिकार । शिक्षा, चिकित्सा उपचार, अवकाश, र आवास चार विशाल पर्वत साधारण नागरिक गर्न, र ती पहाडहरू गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई नाश. हाल, एक ग्रामीण केटी संग राम्रो ग्रेड मा उनको दोस्रो वर्ष को उच्च स्कूल कूद द्वारा आत्महत्या बन्द एक किनभने त्यो भोक थियो. गर्ने एक साधारण महिला सकेन खर्च गर्न चिकित्सा उपचार खोज्न गर्न बाटो दिनुभयो उनको रोग छ । बायाँ पछि छोराछोरीलाई प्रतिबद्ध संयुक्त आत्महत्या ।. एक हात मा, विपत्ति वर्षा मा तल साधारण नागरिक, र अर्कोतर्फ, ठूलो मान्छे छ, बाहिर संसारको देखेर र पैसा खर्च. यो रूपमा भने तिनीहरूले सबै छौं द्वारा शाही शिक्षण कि एक हुनुपर्छ"रुचि को कम्पनी विदेशी देशहरुमा भन्दा घरेलू दास छ ।"अन्यथा, त्यहाँ छैन कुरा मा सडक को कसरी"अमेरिका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, चीनको मुद्रा, अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, सरकार, अधिकारीहरु गर्न सक्छन्, धनी दोस्रो पुस्ता गर्न सक्छन्, र सक्छ यो केवल साधारण मान्छे, जसले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।"तर, जबकि"आकाशीय साम्राज्य"फिट हुन सक्छ हालको राजवंश, यो देखि किंग. यस उमेर मा, जहाँ वास्तविकता भन्दा ठूलो छ कल्पना प्रयोग, केही बस एक पटक यो तल ओर्लेर मेरो घर देखि एक नर्सरी स्कूलमा मताधिकार. हरेक दिन जब यो समय हुर्काउन गर्न झण्डा, म सुन्न को यस प्रकारको उन्माद:"म चीन प्रेम, म प्रेम को पाँच-तारे रातो झण्डा."यो छ छैन असामान्य छ । देशभक्ति एक आजीवन प्रक्रिया भनेर सुरु देखि शैशवकालदेखि छ । त्यसैले, देश प्रेम छ समीकृत प्रेम गर्न सरकार र साँच्चै ठूलो. गर्न नसक्नुको छुट्याउन र विश्वव्यापी लोकतन्त्र, साधारण अर्थमा र, मानव अधिकार र सार्वभौमिकता, को परिणाम हो. तैपनि, जे छ दबावपूर्ण प्रत्यारोपित, अवधारणाहरु साथ दिनु भनेर यस मात्र हुन सक्छ हिंसात्मक, र झूटा । तिनीहरूले कालो र सेतो, तिनीहरूले बलात्कार सत्य छ । तर रूपमा चाँडै सत्य मुनाहरूजस्तै बाहिर, यो हुनेछ, र सम्म, यो फिर्ता राखे सँगै । देशभक्ति पहिलो सिकार बलात्कार । जसलाई गर्छ देश हौं । भने एक देश छ, कुनै नागरिक स्वतन्त्रता, कसको यो गर्न सक्छन् हौं । बस रूपमा महान् पूर्वज माओत्से, भन्नुभयो"छ, जो कि नक्कली छ नक्कली छ । को भेस टाढा छ ।"हाल, नयाँ शब्द"झाओ देश"एक उत्कृष्ट को हाम्रो देश, गणतन्त्र, र नयाँ चीन । छ निराकरण को केहि प्रकट गर्न यसको साँचो सार ।"झाओ देश"आउँछ लु गरेको"साँचो कथा को आह क्यू,"जो जवान मास्टर झाओ देख्नासाथ इम्पेरियल परीक्षा काउन्टी स्तर मा, र आह क्यू पनि चाहन्छ घमन्ड गर्न एक बिट छ । उहाँले तुरुन्तै हुन्छ एक थप्पड अनुहार मा देखि पुरानो मास्टर झाओ, कसले भन्छ,"हो, तपाईं पनि योग्य को थर झाओ."मास्टर गरेको घरेलू र देश हुनेछ निषेध गरेको एक दास लिएर देखि एक कट को आफ्नो बिरामी-खाएका लाभ छ । अन्यथा, महारानी क्सी सक्छ गरेका छन् यो एक राष्ट्रिय नीति"गर्न रुचि को कम्पनी विदेशी देशहरुमा भन्दा घरेलू दास छ ।"ठूलो मान्छे निरंतर को बिखरने पैसा छ देखिन्छ नै मूल । वांग शि गरेको हाल रिसाएर हजारौं खरीद शेयर को द्वारा गरेको याओ को परिणाम हो यो को मास्टर र आफ्नो शक्ति । अतीत मा, व्यापार थियो कुरा तपाईं बिक्री र मलाई खरीद. त्यहाँ थियो एक अनुबंध र एक लेनदेन छ, र यो निष्पक्ष र उचित थियो । तर पनि यति, तपाईं थिए भने एक परिवार देखि भनेर बेचे उत्पादन, र तपाईं चाहन्थे बराबर संग, मलाई अचानक रिस थियो उठ्ने मा वांग, संसारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली छ । तपाईं विचार छ कि तपाईं किनभने पैसा अब, तपाईं सकेजति ग्रहण थर झाओ.
हा । आँखा मा रातो, दास छन् दास, नीच दास छ । र यो जस्तै कप्तान बो गरेको तिरस्कार लागि मिंग । के स्थिति गर्छ मिंग छ, र स्थिति के म । यो"यसो भन्दै हामी साम्यवाद को उत्तराधिकारियों"भाइरल गएका छ.
प्रश्न, सोध्नु हुनेछ जब हाम्रो उत्तराधिकारी ठाउँ लिन, कि एक प्रश्न सोध्न स्वर्ग । जब यो आफ्नो बारी लागि, उत्तराधिकारी हुनेछ तपाईं पनि योग्य हुन को थर झाओ. त्यहाँ कुनै उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि स्थान सेवा र्दुलभ छन् । यो एक लाल शौचालयको पूर्ण मान्छे को । जब देशभक्ति थियो छलफल अवधारणा को भक्ति, कुनै एक अस्वीकार थियो यो पहुँच, तर रूपमा चाँडै रूपमा यो भए एक अपिल मुनाफा लागि, यो केवल एक हतियार को हात मा शक्तिशाली छ । सबै शक्तिहीन बदबूदार मजाक मान्छे को मासु को बोर्ड । देशभक्ति"प्रेम लागि कुकिंग पट", एक मजाक लागि इच्छुक फूल छ । अरू कसैले गर्न सक्छन् शिकार तपाईं, भने तर, तपाईं यो विश्वास, तपाईं गरिन एक वास्तविक मुर्ख ब्यक्ति, किनभने आफ्नो थर छैन झाओ. घर से, र त गर्छ देश ।"प्रेम लागि कुकिंग पट"सपना को स्वयंसेवक पचास केन्द्र, र सबै साधारण नागरिक राखे गर्नुपर्छ, गर्न बाँकी छ ।"प्रेम लागि कुकिंग पट"प्रकट गर्न झाओ देश हुन सक्छ भनिन्छ कुल ओवरहाल. यो एउटा प्रेरित काम को, जहाँ रचनात्मकता छ केहि, धेरै नजिक आफ्नो साँचो उपस्थिति छ । पचास केन्द्र कसले भन्न,"तपाईं छैनन् भने एक पैट्रियट बाहिर प्राप्त,"चीन को हो उदास दास कमाई आफ्नो पचास सेन्ट छ । पारित बन्द आफैलाई एक मास्टर रूपमा छ असफल:"तपाईं पनि योग्य को थर झाओ."रूपमा चाँडै रूपमा यो खडा, यी कुकुर-जस्तै दासहरू आत्मसमर्पण आफ्नो हतियार छ । यो राजवंश, जब प्रयोग झाओ देश विधि हुन सक्छ, मरम्मत, र सबै अन्त हुनेछ रूपमा पुल फिर्ता जाने हुँदा पुल, सडक फिर्ता जान भइरहेको सडक, आठ बैनर फिर्ता जाने हुँदा आठ बैनर, दास फिर्ता जाने हुँदा दास, बदबूदार मजाक मान्छे फिर्ता जाने हुँदा बदबूदार मजाक मान्छे । यो पनि राखे हेलो भन्दा फिर्ता. बस रूपमा दासहरू को किंग राजवंश गर्न सकिएन भन्न"मेरो ठूलो किंग"तर सट्टा भन्न थियो"आफ्नो ठूलो किंग,"झाओ देश, र उद्योग को मान्छे को झाओ देश. संग अलग को एक प्राकृतिक, शक्तिशाली हुनेछ स्पष्ट, प्रतिष्ठित र बस जस्तै कि, यो धूलो थियो बसोबास सबैभन्दा उल्लेखनीय र निश्चित तरिका.
हत्या वकिल, कानून कम्पनीहरु को लागि चीन मा हरेक शहर
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था दृढ संगयसको मुख्यालय मा स्थित बेइजिङ । स्थापित मा. पहिले नै एक प्रतिष्ठा स्थापित मा चिनियाँ कानूनी सेवाहरू बजार । संग अधिक वकिल.
अब हामी सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक व्यवस्था कम्पनीहरु मा एशिया र । अन्य कार्यालय: गुआंगजौ.
टियांजिन व्यवस्था दृढ-मर्ले चोओ को एक टीम हङकङ आपराधिक रक्षा वकील संग शीर्ष-टियर प्रतिष्ठा र द्वारा स्थापित भएको थियो साझेदार क्रिस्टोफर-मर्ले.
व्यवस्था दृढ छ
अनिता चोओ र एरिक. सबै तीन थिए पूर्व साझेदार मा आपराधिक व्यवस्था को टीम. हामी विश्वास ग्राहक चासो हो मा धेरै हृदय हाम्रो व्यापार. र हामी सक्दो प्रयास उत्कृष्टता हासिल गर्न सबै हामी के को लागि तिनीहरूलाई छ । हामी आफूलाई गर्व मा । बेइजिङ व्यवस्था दृढ एक शीर्ष-टियर प्रदायक को कानूनी सल्लाह र प्रतिनिधित्व. जहाँ हाम्रा मानिसहरू विश्वास मा एक दृष्टिकोण-तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन्. आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न.
डाउनलोड र तुलना डाटा
व्यापार अर्थशास्त्र सदस्य हेर्न सक्नुहुन्छदेखि लगभग दुई सय देशहरुमा सहित. अधिक बीस लाख आर्थिक सूचक.
सरकार बन्धन पैदावार
विनिमय दर. स्टक र वस्तु मूल्य छ । व्यापार अर्थशास्त्र आवेदन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (एपीआई) प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान गर्न हाम्रो.
पाउन कसरी एक अनुबंध निर्माता मा चीन
उमेर ले, टेलर चाहन्थे थियो एक कम्पनी शुरू गर्न, वर्ष को लागि त्यहाँ यति थियो कि श्रम र, भने तपाईं के गर्न पाउन एक समाप्त एक बजार मा, यो त महंगा छ । भन्ने थियो उत्पत्ति को विचार छ । लागि अन्य सामान, को लागि वा लागि पोलो शर्ट, त्यहाँ यति धेरै प्रतिस्पर्धा छ । तर, यहाँ म जस्तै म महसुस थियो लागि उत्पादन, र प्रविष्ट गर्न सक्छ बजार साँच्चै. मा, म थाह कति म आवश्यक छ कि एक कम्पनी हुनेछ, सानो आला र सरल छ, त्यसैले म साँच्चै सकेन नियन्त्रण र सबै बुझ्न देखि सुरु भएको छ । म मूलतः बस कुरा मेरो मालिक एक दिन र भन्नुभयो: 'म छु छोडने, र म लिन लागिरहेको छु, एक-तरिका उडान गर्न चीन र मान्छे पाउन बनाउन यो उत्पादन । बस भुना मा केही अवकाश पैसा र एक उडान मा चीन, मेरो मतलब, यो मेरो लागि काम, तर म थियो कसरी कुनै विचार अनुभवहीन भन्ने थियो । त्यसैले म बन्द सेट गर्न टाउको, केही कारखानों र व्यापार शो मा चीन छ । म बन्द सुरु, बेइजिङ को प्रकारको छ जो पूर्वोत्तर चीन, र काम मेरो बाटो तल, म कहाँ थियो मुख्यतयाथियो कि एक विशाल विनिर्माण शहर । म पनि खर्च समय मा, जो पनि छ छैन टाढा देखि हङकङ । पागल कुरा छ, यी शहर हो म कहिल्यै सुनेका थिए, र तिनीहरूलाई प्रत्येक छ जस्तै आठ लाख मान्छे. शाब्दिक छन् एक लाख कारखानों कि क्षेत्र मा, प्रांत, र को छ कि पागल । एक दिन म मा थियो, बस वरिपरि हिँडिरहेका र खाने एक पकौडियां मा एक सडक खाना खडा, र भावना धेरै सहज छ । त्यसपछि म लाग्यो, 'यो पागल छ, के हुँ म गरिरहेको छ । म त्यहाँ थियो कि पहिलो यात्रा को कुल लागि तीन-र-एक-आधा सप्ताह. म थियो बेल्ट संग थियो मलाई लागि बनाएको मलाई जब म कान्छो थियो । म थियो एक व्यापार शो मा सयौं संग, को विक्रेताहरु र निर्माताहरु । केही कारखानों जस्तै थिए, 'हामी राख्न आवश्यक बेल्ट ।, यद्यपि.
तर अधिक र अधिक सम्भव निर्माताहरु अनुरोध एक नमूना, म समाप्त काटन बेल्ट मा बारे बीस टुक्रा र तिनीहरूलाई बाहिर । मात्र बारेमा छ पछि माध्यम र फिर्ता आए मलाई संग नमूनों छ । त्यहाँ थियो एक कम्पनी म फेला थियो कि सबैभन्दा अनुभव संग काम अमेरिकी ब्रान्ड र गुणस्तर धेरै राम्रो थियो । एक मेरो राखे, मलाई संग संपर्क मा, तिनीहरूलाई र म मा हस्ताक्षर आफ्नो लागि कारखाना मा.
म जाँदै थियो मेरो पेट धेरै छ । यो निश्चित एक छ कि कार्यालय मा हङकङ । यो सिलाई भाग हाम्रो उत्पादन गरेको छ उत्तरी भाग चीन, र छ जहाँ छाला कारखाना छ, जहाँ उत्पादन, भेला छ छ । म पक्कै गरे, गल्ती को धेरै मा मेरो सुरुमा दृष्टिकोण, तर तपाईं थाहा छैन, तपाईं के थाहा छैन. र यो मेरो लागि बाहिर काम मात्र बाटो जाँदै हुनुहुन्छ यो काम गर्न जान छ, पूर्ण खन्नु छ । मान्छे को एक धेरै प्रयास गर्न चीन संग काम बिना वास्तवमा त्यहाँ जाँदै छ । तर बस जा त्यहाँ लागि मलाई कटौती कम से कम चार महिना ई-मेल ढिलाइ र संचार र समय फरक को बाहिर मेरो विनिर्माण । यो मिल्यो रोलिंग बल धेरै छिटो छ । सुरुमा, यो महंगा थियो, तर साँच्चै सरल, जहाज गर्न कुराहरू फिर्ता र निस्कने छ । तपाईं बस प्राप्त, एक फेडेक्स खाता र दुई दिन पछि तपाईं नमूनों मा आफ्नो हात छ । अब हामी माथि छौं ढुवानी गर्न एक ठूलो थोक, हामी काम गरिरहेका छौं संग एक तेस्रो-पक्ष माल फर्वार्ड छ जो कम्पनी, पेचीदा मामला, तर कम खर्चिलो छ । म फिर्ता प्राप्त गर्न प्रयास गर्न हङकङ बारम्बार । सबैभन्दा रोचक अनुभव म थियो, म मा बसिरहेका थिए, हङकङ मा एक अमेरिकी पल्ट भनिन्छ मा, को चीनी पूर्वीय होटल, खाने वा केहि. यो अमेरिकी आए र बसे अर्को मलाई तल छ । आफ्नो कम्पनी बनाउने थियो सानो टोपी को दक्षता सुधार को लागि बियर नल मा स्टेडियमों. उहाँले आउँदै थियो भन्दा गर्न स्रोत, एक उत्पादन पनि, केवल एक यांत्रिक र प्राविधिक भन्दा मेरो । यो बस देखाए सम्भाव्यतालाई को काम मा चीन, जहाँ दुई अमेरिकी नगर्ने भाषा बोल्न, व्यवहार मा दुई उत्पादनहरु हुन सकेन कुनै पनि अधिक विभिन्न, बस त्यहाँ यो अर्थमा कि तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् केहि पनि गरेका छन् ।.
प्राप्त गर्न कसरी स्थायी निवास र नागरिकता मा लगानी गरेर युरोप
गतिशीलता को एक छ परिवारका सदस्य पनि हुन सक्छ समावेश, आवेदन र नागरिकता सकिन्छ मा पारित गर्न भविष्य पुस्तामा द्वारा उद्गम एक निवेशक प्राप्त पर्छ कम से कम दुई लाख एक एकल वा पोर्टफोलियो को गुण संग कम्तिमा एक प्रयोग रूपमा एक प्राथमिक निवास । संसाधन आवेदन लिन्छ लगभग तीन महिना, एक पासपोर्ट जारी छ महिना भित्रयस्तै साइप्रस गरेको टोकियो कार्यक्रम, माल्टा व्यक्तिगत निवेशक कार्यक्रम हो नागरिकता-द्वारा-लगानी कार्यक्रम प्रदान गर्दछ कि लगानीकर्ताले गर्न मौका प्राप्त माल्टिज र, द्वारा विस्तार, युरोपेली संघ नागरिकता छ । परिवारका सदस्य पनि हुन सक्छ समावेश, आवेदन र नागरिकता सकिन्छ मा पारित गर्न भविष्य पुस्तामा द्वारा उद्गम. एक निवेशक चयन गर्न तीन तरिकामा लगानी गर्न: एक गैर- योगदान कम्तिमा, को राष्ट्रिय विकास र सामाजिक निधि सम्पत्ति लगानी को कम्तिमा, मा अचल सम्पत्ति वा पट्टा लागि सम्पत्ति कम्तिमा, आयोजित हुनुपर्छ जो वा चार्टर लागि न्यूनतम पाँच वर्ष क्रमशः वा एक लगानी को कम से कम, मा सरकार-अनुमोदित वित्तीय उत्पादनहरु कायम छ कि लागि एक न्यूनतम पाँच वर्ष छ । संसाधन आवेदन लिन्छ लगभग चार महिना को कुल, बाह्र महिना मुद्दा पासपोर्ट को मिति देखि सुरुमा निवास छ । एक गरेको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम छ साइप्रस नागरिकता लगानी कार्यक्रमका द्वारा, जो सबैभन्दा सरल र कुशल मार्फत प्राप्त एक ईयू पासपोर्ट छ । जबकि दुवै साइप्रस र माल्टा कार्यक्रम प्रस्ताव एक ईयू पासपोर्ट, साइप्रस प्रदान गर्दछ सबै भन्दा तेज नागरिकता कार्यक्रम छ, र यसैले सबै भन्दा तेज व्यापक मार्ग युरोप संग, एक पासपोर्ट जारी छ महिना भित्र र कुनै निवास आवश्यकताहरु । मा अनुहार मूल्य, माल्टा पासपोर्ट देखिन्छ रूपमा एक आकर्षक विकल्प रूपमा यो प्रदान गर्दछ भिसा-मुक्त पहुँच गर्न अमेरिकी तथापि, यो एक महंगा प्रिमियम तिर्न र पनि एक समय- प्रक्रिया छ (न्यूनतम बाह्र महिना को लागि माल्टाका पासपोर्ट जारी गर्न) गर्न यात्रा गर्न, यो, विशेष गरी दिएको भन्ने तथ्यलाई सबैभन्दा यात्री हुनेछ इरादा छैन लागि जान अधिक एक भन्दा वर्ष. यो पनि लायक छ कि एक साइप्रस पासपोर्ट होल्डर पाउनेछन्, ढिलो होस् या पछि, एक भिसा अधित्याग रूपमा अमेरिकी एक ईयू सदस्य विशेष गरी भने हामीलाई राख्न चाहन्छ आफ्नो भिसा माफी युरोप. यसबाहेक, लगानी मा फिर्ती मा साइप्रस भन्दा छिटो माल्टा मा संग सबै भन्दा सम्पत्ति योग्य हुनुको लागि बिक्री पछि तीन वर्ष भन्दा पाँच वर्ष मा माल्टा. एक पर्यटन अर्थव्यवस्था र रणनीतिक स्थान को मा, अफ्रिका, एशिया र युरोप, सम्पत्ति निवेश अत्यधिक पछि खोजे साइप्रस मा समयमा होल्डिंग अवधि, सम्पत्ति भाडामा सकिन्छ उत्पन्न गर्न अतिरिक्त को भाडा आय पछि त बेचे यसको बुढेसकालमा अचल सम्पत्ति बजार छ । कर्पोरेट र आवासीय कर साइप्रस मा छन् बीचमा यो मा सबै भन्दा कम युरोप संग, कुनै विदेशी आय कर, सम्पत्तिको कर, वा कर मा चासो जितेको छ । दिइएको को फाइदा को एक साइप्रस पासपोर्ट, यो विकल्प साँच्चै लगानी को मामला मा समय र पैसा दुवै छ । आसानी को लागि यात्रा, युरोप मा र भिसा-मुक्त गर्न ईयू आकर्षक कर शासन सुन्दर भू-मध्य मौसम र उच्च-मानक को जीवित सहित पहुँच गर्न सबै भन्दा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, साइप्रस टोकियो कार्यक्रम छ, एक शंका बिना, सबै भन्दा राम्रो विकल्प लागि आफ्नो लगानी गर्न युरोप. मा स्थापित द्वारा जीन-ç हार्भे, हार्भे व्यवस्था समूह बलियो उपस्थिति कायम भर एशिया, दक्षिण अमेरिका र मध्य पूर्व देखि यसको प्रारम्भिक शुरुवात, र मा विकसित छ एक अग्रणी बहुराष्ट्रिय व्यवस्था दृढ छ । कार्यालय संग मोन्ट्रियल, हङकङ, जियामेन, हो ची मिन्ह शहर, हनोई, दा, बैंकक, सिंगापुर, मनिला, एंटीगुआ बार्बुडा, डोमिनिका, सेन्ट किट्स किट्स ग्रेनेडा साथ, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क, हार्भे व्यवस्था समूह प्रदान गर्न सक्छन् असाधारण कानूनी प्रतिनिधित्व गर्न कारोबार र व्यक्तिहरूलाई. जबकि हरेक प्रयास गरिएको छ को सत्यता सुनिश्चित गर्न यो प्रकाशन छ, यो गर्न इरादा छैन प्रदान कानूनी सल्लाह रूपमा व्यक्तिगत परिस्थिति फरक हुनेछ र छलफल गर्नुपर्छ एक विशेषज्ञ संग र वा वकील.
संग के गर्न सुनको नमूनों देखि चिनियाँ आपूर्तिकर्ता छ ।
कसरी खरीदारों चयन एक चिनियाँ आपूर्तिकर्ता छ । सबैभन्दा अक्सर, तिनीहरूले तुलना कोटेशन र नमूनेअन्य विचार, यस्तो जवाब वा विनिर्माण क्षमता, खातामा लिएका छन् द्वारा एक अल्पसंख्यक को आयातकों छ । यसैले महत्त्व को नमूना । खराब नमूना हुनेछ शायद रही मदत आदेश छ । चिनियाँ आपूर्तिकर्ता लागि प्रसिद्ध छन् होनहार केहि गर्न तिनीहरूले गर्न सक्छन् प्राप्त, र के बाहिर आंकडा प्रयास संग गर्न पछि यो छ । म यो सुने पनि साधारण छ मा अन्य एशियाली देशहरूको.
यो हुन देखिन्थ्यो विपरीत, उदाहरणका लागि, मा पहिलो कम्पनी जहाँ म काम, फिर्ता मा फ्रान्स । विक्रेता भए भनेर गनगन नमूनों पठाएको गर्न आफ्नो आशा ग्राहकहरु थिए रूपमा छैन रूपमा राम्रो उत्पादनहरु वितरित छ । कि कम्पनी भइरहेको थियो बढी होसियार यसको प्रतिष्ठा बजार मा.
म अनुमान चिनियाँ आपूर्तिकर्ता हुनेछ एक राम्रो हंस छ भने, तिनीहरूले सुने । फिर्ता चीन स्रोत छ । दाऊदले डेटोन बस लेखे एक धेरै चिंताशील पोस्ट हकदार, - र वास्तविकताओं को चिनियाँ बजार जहाँ उहाँले वर्णन, कपट र खेल वरिपरि नमूनों: सबैलाई छ भनेर कहिल्यै काम मा चीन र प्रश्नहरू खडा गुणवत्ता बारेमा छ कुनै शंका सुने लाइन"कुनै एक मेल गर्न सक्छन् नमूना सय"वा यस्तै कुरा. मजा भाग सुरु गर्दा कोही छ लागू गर्न गुणवत्ता स्तर छ । धेरै लागि, उत्पादन विभाग को एक सूची लेखिएको विनिर्देशों लागि पर्याप्त छैन एक निरीक्षक अनुमान गर्न छ कि एकरूपता हासिल छ वा छैन । सम्झना, व्यावसायिक निरीक्षक मा कम्पनीहरु सामान्यतया धेरै पातलो उत्पादन ज्ञान छ । प्रयोग गर्न एउटै उदाहरण को रूप मा डेटोन गरेको लेखमा, एक निरीक्षक सक्षम जाँच छन् कि तीन तहहरू को रंग र एक पत्र मा एक काठ को टुक्रा. वा यो राम्रो देखाउन उहाँलाई एक अनुमोदित नमूना र सोध्न भने यो देखिन्छ र महसुस नै छ । दोस्रो विकल्प राम्रो छ, निश्चित लागि.
तर, ठूलो र भारी आइटम, कसरी आयातकर्ता पठाउन एक नमूना को निरीक्षक । यो एक बारम्बार समस्या छ । फोटो सामान्यतया एक खराब प्रतिस्थापन, खुसीको कुरा छ । केही ठूलो खरीदारों सोध्न कारखानों राख्न एक"सुनको नमूना"तिनीहरूले अनुमोदित र फिर्ता पठाएको अन्तर्गत छाप छ । यस मामला मा, त्यहाँ छ, अक्सर कुनै को सूची जाँच अंक लागि निरीक्षक । सुनको नमूना र प्याकेजिङ्ग दावा मात्र हो स्रोतहरु जानकारी को सन्दर्भमा उत्पादन गरेको.
अर्को समस्या छ भनेर, भने निरीक्षक सूचनाहरू एक विसंगति र संकेत, यो कारखाना लगभग निश्चित आह्वान एक प्राविधिक कारण भनेर कसैले प्रमाणित गर्न सक्छन्. यदि खरीदार कुनै उत्पादन अनुभव, त्यो हुन सक्छ एक कठिन समय लिएर निर्णयहरू. धेरै सानो खरीदारों मा धेरै केन्द्रित छन्, मूल्य, जहाँ बिन्दु गर्न तिनीहरूले छन् डर कठिन आपूर्तिकर्ता छ । तिनीहरूले भन्ने थाहा मूल्य र ढिलाइ वृद्धि गर्छन (पछि पनि आदेश जारी गरिएको छ) जब तिनीहरूले दबाव कारखाना गुणवत्ता सुधार गर्न छ । कहिलेकाहीं यो खरीदार को भावना दिन्छ भनेर उहाँले थाह छ, उहाँले प्राप्त छैन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ के छ, मात्र बन्न अधिक मांग एक पटक कारखाना एक कमजोर स्थिति छ । केही खरीदारों छन्, वास्तवमा एकदम अनुभवी खेल मा खेल को यस प्रकारको, र तिनीहरूले तिनीहरूले सोच्न सक्छन् आफ्नो चिनियाँ आपूर्तिकर्ता अधिकांश समय.
तिनीहरूले भने स्थिति मा हो जहाँ तिनीहरूले रद्द गर्न सक्छन् आदेश अन्तिम मिनेट मा (प्रयोग गरेर एक एल सी र छैन पूर्व-बिक्री केहि गर्न आफ्नै ग्राहकहरु), यो वास्तवमा व्यावहारिक छ । तर यी सर्ट-अवधि लाभ दिन तिनीहरूलाई एक खराब प्रतिष्ठा बीचमा चिनियाँ आपूर्तिकर्ता, विशेष गरी भने प्रश्न मा उत्पादन भएका छन्, एक वा दुई शहर मात्र छ । स्पष्ट समाधान गर्न जबरजस्ती गर्न कारखाना बनाउन केही टुक्रा कार्यशाला मा, एउटै अवस्थामा रूपमा थोक उत्पादन । तर धेरै कारखानों यो इन्कार बढ्छ किनभने यो सामाग्री बर्बाद र श्रम उत्पादकत्व छ । र यो बन्द गर्न असम्भव छ लागि निश्चित उत्पादनहरु । अर्को समाधान हुनेछ संग तल बस्न आपूर्तिकर्ता, मा जाने को विवरण नमूना लेख्न, र के स्वीकार्य छ र के छैन. यो हुन सक्छ ल ठिक छ भने खत्म छ, सिद्ध छैन फिर्ता मा, उदाहरणका लागि तर कसरी वर्णन गर्न यी स्पष्ट छ । यो सम्भव छ गर्न को फोटो लिन छ के ठीक र के छ.
यो हुन सक्छ एक वास्तविक चुनौती छ । यदि खरीदार साँच्चै चाहनुहुन्छ"वास्तविक कुरा", उहाँले चाहन्छु राम्रो हुन क्रिस्टल स्पष्ट, यो बारेमा छ । एक विकल्प हुनेछ:"' निरीक्षण कम्पनी, र तिनीहरूले इन्कार हुनेछ केहि छैन भनेर पूर्णतया हिंड्न नमूना । तिनीहरूले धेरै सख्त हो".
यस प्रकार को कुराकानी गर्नुपर्छ, पहिले ठाउँ लिन आदेश जारी छन् र जम्मा तार छन्, र त्यहाँ हुनेछ अझै पनि केही जोखिम छ । लागि ठूलो आदेश, एक धेरै स्पष्ट सूची को विनिर्देशों र एक अनुबंध एक राम्रो विचार हुनेछ. म सुझाव नयाँ खरीदारों तिनीहरूले लगातार गरौं कारखानों आशा गर्न के थाहा उदाहरणका लागि, हामी प्रयास गर्न बाहिर राख्नु, धेरै स्पष्ट अघि हामी तिर्न जम्मा कि हामी साँच्चै हो जा गर्न हुन धेरै सख्त छ र हामी आषा छौं पालन गर्न हाम्रो अनुबंध र स्तर ठीक छ । हामी पैसा धेरै खर्च र समय मा मान्छे प्राप्त गर्न कारखानों अघि हामी तिर्न कुनै पनि मुद्रा बनाउन बस यी कुराहरू स्पष्ट गर्न धेरै स्तर को कारखाना व्यवस्थापन । हामी चाहन्छौं कारखानों - मा जसरी हाम्रो प्रतिज्ञा गर्न साँच्चै कडा यो आउँदा र रही सबै रूपमा नजिक सय शारीरिक रूपमा सम्भव छ । म चित्रा म हुन सक्छ मा एक दुखाइ को बट छ, तर कम से कम म लागिरहेको छु इमानदार र हुन. यो ब्लग द्वारा लेखिएको छ, एक प्रमाणित गुणवत्ता इन्जिनियर संलग्न गरिएको छ जो चिनियाँ निर्माण पछि. यो गर्न सजिलो छ हाम्रो समाचार पत्रको सदस्यता जहाँ तपाईं प्राप्त छौँ साप्ताहिक अद्यावधिक लागि व्यावसायिक व्यापारीहरु र निर्माताहरु मा राम्रो समझ, नियंत्रण, र सुधार विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला मा चीन छ ।.
अमेरिकी समूह प्रक्षेपण आवेदन मुक्त गर्न चिनियाँ वकील - मसीही पोस्ट
एक मसीही धार्मिक स्वतन्त्रता संगठन शुरू छ एक अनलाइन आवेदन मुक्त गर्न चीन सबैभन्दा प्रसिद्ध वकील
समूह घोषणा बिहीबार । टेक्सास आधारित चीन सहायता संस्था आग्रह गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कारबाही तर्फबाट मसीही मानव अधिकार वकील गाओ फिसिङ हस्ताक्षर गरेर निवेदन गर्न चिनियाँ सरकारले जारी गर्न उहाँलाई । थियो.
अन्तिम मा देखेको गाओ एक विशेष लक्ष्य को चिनियाँ सरकारले किनभने उहाँले बाहिर पुगेको अमेरिकी कांग्रेस गर्न पर्दाफास चीनको मानव अधिकार उल्लंघन । उहाँले चिरपरिचित छ रक्षा को लागि भूमिगत मसीहीहरूले खेदोमा सदस्यहरु.
र मानव अधिकार आफ्नो परिवार.
जो पनि थिए भइरहेको खेदो गर्न सक्षम थियो भाग्ने सुरक्षित गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका मा पहिले मार्च । चीन सहायता.
मदत जो समन्वय परिवारको उम्कन भने.
तिनीहरूले गहिरो चिन्ता गाओ गरेको राम्रो-हुनुको । त्यसैले सम्म. इमेल पठाइएको छ गर्न चिनियाँ सरकार र मिडिया स्रोत छ । बाहिर भनेर नम्बर. मान्छे हस्ताक्षर गरेका आवेदन छ ।.
चिकित्सा परीक्षा, चीन
सबै विदेशीहरू लिन आवश्यक छ परीक्षा क्रम मा अध्ययन गर्न चीन मा छ । केही विश्वविद्यालयहरुविद्यार्थीहरूको आवश्यकता पठाए चिकित्सा परीक्षा तिनीहरूले जब लागि लागू कार्यक्रम. तपाईं यो गर्न सक्छन् जब तपाईं आउनुहुन्छ मा चीन छ । यो एक लागि आवश्यकता को एक्स (अध्ययन) भिसा छ । तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ शारीरिक चिकित्सा परीक्षा आफ्नो घर देश मा.
वा जब तपाईं आउनुहुन्छ मा चीन छ । हामी सामान्यतया सल्लाह लिन विद्यार्थीहरूको चिकित्सा परीक्षा मा चीन पहिले यो किनभने कहिलेकाहीं परीक्षण चिकित्सा मा लिएका विद्यार्थी घर देश मा स्वीकार गर्दै छन् भने त्यहाँ गल्ती छ वा छैन मा सही ढाँचा र विद्यार्थी लिन आवश्यक चिकित्सा परीक्षण मा फेरि चीन । गर्न लिन चिकित्सा परीक्षा.
चीन मा यो लिन्छ बारेमा - मिनेट. र शुल्क लगभग. कि सम्झना किनभने हरेक विद्यार्थीलाई आवश्यक यो के को सुरु मा प्रत्येक.
केन्द्र बन्न सक्छ निकै व्यस्त छ. त्यसैले यो राम्रो छ आइपुग्नु पहिले । नोट: आफ्नो पासपोर्ट ल्याउन र एक प्रतिलिपि छ । तपाईं के गर्न जाँदैछन् यो मा आफ्नो घर देश तपाईं पहिले चीन आउन. तपाईं डाउनलोड गर्नुपर्छ तलको फारम. र सोध्न एक डाक्टर गर्न फारम पूरा. अस्पताल गर्नुपर्छ साइन इन कागजात र टिकट संग यो सरकारी छाप भन्दा आफ्नो तस्वीर हो । डाउनलोड आफ्नो मुक्त पुस्तिका र जानकारी कृपया तल फारम पूरा त हामी गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो समर्थन छ ।.
चीन आईपी व्यवस्था कडा - बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्था मात्र
Maksuvõlad toetussummade on sagedased